Activity – Federal Journal
Today is: Tuesday, June 28, 2022
တောပုန်းဆိုလည်း တောပုန်းပေါ့ ခင်ရေ။
ဘာမထီဘူးလို့ အော်ဟစ်ဖူးသူတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့။
ကျည်တွေရှင်းကြ တင်းထားတဲ့ စိတ်တွေကို
ထိရှရင်း အိမ် ပြေးသူပုန်ကောင်ဆိုတော့လည်း
စကစကို တော်လှန်တဲ့ သူပုန်ကောင်ပဲပေါ့ ခင်ရယ်။
အပွင့်၊ အခက်၊နေရာ၊ ရာထူး
ဘာမှရူးစရာမလိုပြန်ဘူး အခမဲ့ တောပုန်းကြီးပေါ့။
ရွှေမလို၊ငွေမလို ဟိုရှေ့က ခွေး ကုန်းနဲ့
မအလ တပ်ပြိုဖို့တော့ လိုတယ်။
ငြင်းမိ၊ဆန် မိ ဒီခရီးကို ဇွတ်တိုးမယ့်
တောပုန်း သူပုန် ကောင်ဆိုလည်း
တောပုန်း သူပုန် ကောင်ပဲပေါ့ ခင်ရယ်။ ။
အလင်းတွေကို အမှောင်ထဲက ငေးခဲ့ဖူးတယ်။
လိုသူ တွေကြား မမှားသော စစ် တရားသော
စစ်လို့ ဘယ်လောက် ဟစ်ဟစ် အိမ်ပစ်ပြေးရတဲ့ တဲ့
မိသားစုလေးတွေကို ငဲ့မိ ညှာမိ စာနာမိ။
စစ်ကို မုန်းရှာမှန်း သိပါတယ်
သေနတ်ကြီးကိုင်ပြီး သိပါတယ်။ ။
ဓါတ်ပုံ- (RCSS/SSA) တပ်စခန်းရှိရာ လွိုင်ကော်ဝမ်း၌ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြင်ကွင်း။
ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်၊ ဇွန် ၂၆
ရှမ်းပြည်တွင်းနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿာနာ ရင်ဆိုင်နေသည့် အကြောင်းအရင်းသည် ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုကို အပြည့်အ၀လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဟု RCSS ဘက်က ယနေ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည်။
“အဓိကကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးကို နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး ပြောရလိမ့်မယ်နော်၊ စိုက်ပျိုးမှုကိုအခြေခံတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဘိန်းပင်စိုက်ပျိုးတဲ့ဟာပေါ့နော်၊ နောက်တခုကတော့ ဓါတုဆေးဝါးကိုအခြေခံတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးပေါ့နော်၊ ရှမ်းပြည်မှာ စိုက်ပျိုးမှုကိုအခြေခံတဲ့ဟာ တွေ့မြင်ရသာက ရှိတော့ရှိတယ် ဒါပေမယ့် မများဘူးပေါ့နော်၊ အဓိကကျတော့ တော်ရွာ၊ ကျေးရွာတွေမှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် စိုက်ပျိုးကြသာ များတယ်၊ အဲဒီတော့ ဒီတော်ရွာတွေမှာစိုက်ပျိုးတဲ့ဟာကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက် တခြားနည်းလှမ်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှိရင် အဲဒီဟာတွေက နည်းသွားမယ်ပေါ့နော်၊
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်ပေါ့ မြေပြင်မှာတွေ့ရှိတဲ့ သုံးသပ်ချက်ကတော့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ လိုသာပေါ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတို့၊ ပညာရေးတို့၊ ကျန်းမာရေးတို့၊ မီးရရှိရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေး စတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့ကို စီမံအကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်၊ အဓိကတော့ အဲဒါက အခြေခံစားဝတ်နေရေးတွေအတွက် ဖြေရှင်းနိုင်မယ် နည်းလမ်းတွေလို့ ယူဆတယ်လေ၊ ဓါတုဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တွေကတော့ ပြည်သူ တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်သာဘဲ၊ပြည်တွင်းထဲမှာလည်း မရှိဘူး၊ ပြည်ပကနေ မှောင်ခိုကနေ ဝင်လာသာဘဲ ဆိုတော့ သာမန်ပြည်သူတွေလည်း မလုပ်နိုင်ဘူးလေနော် အဲဒီလို နှစ်ပိုင်းပြောလို့ရသာပေါ့”ဟု ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူးခမ်းစံက ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်သို့ ပြောဆိုသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးပေါ်လစီအရ ဘိန်းအစားထိုးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပထမအဆင့် ပူးပေါင်းမှုအနေဖြင့် ၂၀၁၂ခုနစ် အောက်တိုဘာလ ၂၇-၂၈ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် UNDO တို့သုံးပွင့်ဆိုင် (Round table meeting) ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး လက်တွေပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အားရကျေနပ်မှုမရှိသေးဘူးဟုလည်း RCSS ဘက်က ဆိုသည်။
“နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ အားရကျေနပ်မှုတော့ မရှိဘူးခင်ဗျ။ အကယ်၍ အဲဒီလို ထဲထဲ ဝင်ဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်နေမယ်ဆိုရင် စောစောစီးစီးပပျောက်ပြီပေါ့၊ နှစ်ပေါင်း ဆယ်နဲ့ချီရှိနေပြီ မပပျောက်ဘူးဆိုတော့ တဖွဲ့တည်းနဲ့ လုပ်လို့မရဘူး၊ လူတိုင်းပူးပေါင်းရမှာဘဲ၊ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်း ပူးပေါင်းရမှာဘဲ၊ အဲဒါကြောင့် အားရမှုတော့ မရှိဘူးပေါ့ သူတို့နိုင်ငံတကာကလည်း ပြည်တွင်းထဲကို လာကူညီမယ်ဆိုရင်လည်း အခက်အခဲရှိမယ် ထင်ပါတယ်၊ လုံခြုံရေးနဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက ခက်တော့ နေရာတွေကလည်း ဝေးသာပေါ့နော်” ဟု ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူးခမ်းစံက ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်သို့ ဆက်ပြော ဆိုသည်။
ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS)သည် မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေး၊ အမြစ်ပြတ်ပပျောက်နိုင်စေရန်အတွက် ဒေသခံပြည်သူများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။
G.T.I-Insein Students' Union
စစ်အာဏာရှင်တို့၏ မတရားကြိုးပေးသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံး　ခဲ့သည်မှာ ယခု ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် (၄၆) နှစ် တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကို ၁၉၅၀ ခုနှစ်က တောင်ငူမြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ အရှိုချင်းလူမျိုး အဖဦးလှဒင်နှင့် အမိဒေါ်နှင်းမြိုင်တို့၏ သားကြီး သြရဿ ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ် သတ္တဗေဒ အထူးပြု ကျောင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကို တစ်ဦးတည်းသော ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် လူသိများပါသည်။ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ချင်းကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၏ အထွေထွေ အတွင်း　ရေးမှူးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ် (၅) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ ကျွန်းဆွယ် အားကစားပွဲ ကျောင်းသား　လှုပ်ရှားမှုတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၂ ခုနှစ် သမိုင်းဝန်းအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွင်လည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းလှုပ်ရှားမှုကြောင့် စစ်အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး အင်းစိန်ထောင်မှာ ချုပ်နှောင်　ခံခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် ထောင်က လွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၄ ဂျွန်လ သမိုင်းချည်မျှင်နှင့် အထည်စက်ရုံ အလုပ်သမားသပိတ်တိုက်ပွဲ၌ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပါဝင်နိုင်ရေး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့　ပါသည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ချင်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီတွင် အထွေထွေ　အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ ရပါတယ်။ ချင်းအမျိုးသားများ၏ နာမည်အရှေ့တွင် “ဆလိုင်း”၊ ချင်းအမျိုးသမီးများ၏ အရှေ့တွင် “မိုင်” ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲဖို့ အဆိုပြုခဲ့ပြီး အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်　ဦးသန့် အရေးအခင်းတွင် စစ်အစိုးရကို ရဲဝင့်စွာ ဆန့်ကျင်ခဲ့သည့်　ကျောင်းသား　ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၄ ဒီဇင်ဘာလ ၅ရက်နေ့မှာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်ဈာပနကို ပို့ဆောင်ဖို့ ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာ၊သိပ္ပံတက္ကသိုလ်နှင့် စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ဦးသန့်　အလောင်းထားရှိရာ ကျိုက္ကစံကွင်းကြီးသို့ နံနက်ပိုင်းတွင် ချီတက်သွားကြပြီး ရဟန်းသံဃာများလည်း ရောက်ရှိနေကြ　ပါသည်။ အားလုံးသောသူများစိတ်ထဲတွင် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ဦးသန့်ကို ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းအစိုးရက အလေးအမြတ်　နေရာမပေးဘဲ ကြံ့တောသုဿန်မှာပဲ မြှုပ်နှံဖို့　စီစဉ်ထားခြင်းကို လုံးဝ မ​ေကျနပ်ခဲ့ကြပါ။ သို့သော်လည်း သူတို့၏　မကျေနပ်ချက်ကို ထုတ်ဖော်မပြောရဲကြပါ။ အစိုးရဆန့်ကျင်သူမှန်လျှင် ထောင်တန်းကျမှာကို သိနေကြသည့်အတွက်　ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအချိန်၌　ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကို ကားပေါ်မှ လူတစ်ယောက်က မိုက်ခွက်ကို လှမ်းပေးလိုက်သည်။ ကိုတင်မောင်ဦးက ကားဆီသို့ လျှောက်သွားသည့်အခါ မိုက်ခွက်ကိုကိုင်ကာ အင်ဂျင်ဘောနက်ပေါ်သို့ တက်လိုက်ပြီးနောက် “ရဲဘော်တို့ ဗိုလ်နေဝင်းဟာ ငါတို့ ကျောင်းသားတွေ၊ ရဟန်းရှင်လူတွေ လေးစားတဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးသန့်ကို သာမန်လူတွေ မြှုပ်တဲ့နေရာမှာ မြှုပ်စေဘို့ စီမံခဲ့တယ်။ ဦးသန့်ဟာ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်တင် မဟုတ်ဘူး၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အားလုံးက အသိအမှတ်ပြုခံရသူ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်၊ ဦးသန့်ကြောင့် ငါတို့နိုင်ငံကို ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတွေ သိရှိပြီး ငါတို့ လူမျိုးကို ကမ္ဘာက လေးစားခံခဲ့ရတယ်။ ငါတို့ ဂုဏ်တက်ခဲ့ရတယ်၊ ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ခွေးသေဝက်သေ သာမန်သဂြိုလ်မြှုပ်နှံဖို့ လုပ်တာကို ငါတို့က လက်ခံရမလား” “ငါတို့က လက်ခံရမလားဟေ့!!!” ဟု ကျားဟိန်းသလို ဟိန်းလိုက်သည့် ကိုတင်မောင်ဦး၏ အသံသည် ကျိုက္ကစံကွင်းထဲ၌ ဟိန်းထွက်၍ သွားခဲ့ပါသည်။
“လက်မခံနိုင်ဘူး” “လက်မခံနိုင်ဘူး” ဟု ကျောင်းသားများကလည်း အတိုင်အဖောက်ညီညီနှင့် ဟစ်လိုက်သောကြောင့် ကျိုက္ကစံကွင်းတခုလုံး ပဲ့တင်ထပ်ပြီး တုန်ဟီး၍ သွားခဲ့ပါတော့သည်။ ထို့နောက် ကျောင်းသားအားလုံးနှင့် လာရောက် ဂါဝရပြုသည့် လူထုကြီးက “မမြှုပ်နှံသင့်ပါဘူး ထိုက်တန်တဲ့နေရာ ပေးသင့်ပါတယ်” ဟု ဝိုင်းအော်ခဲ့ကြကာ ဦးသန့်အခေါင်းကြီးကို တက္ကသိုလ်သို့ ယူဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကို ကျောင်းသားအများစုက ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ဦးသန့် အရေးအခင်းရဲ့ ဈာပနကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်လည်း အရွေးခံခဲ့ရပါသည်။ စစ်တပ်က တက္ကသိုလ်ဝန်းထဲကို အကြမ်းဖက် ဝင်ရောက်မဖြိုခွဲခင် အဖမ်းမခံဘဲ ရှောင်ထွက်ခဲ့ပါသည်။ ဦးသန့်အရေးအခင်းဖြစ်ပြီး အစိုးရက ဝရမ်းထုတ် ခံရသည့်အတွက် နယ်စပ်ကို ရှောင်ထွက်သွားခဲ့ပြီး ၁၉၇၅ ခုနှစ် မေလမှာ ပြည်တွင်းသို့ တိတ်တဆိတ် ပြန်ဝင်လာပြီး ဇွန်လတွင် အစိုးရ၏ ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာလှဟန်က တက္ကသိုလ် ကျောင်းများကို လာရောက်ပြီ ကျောင်းသားများ၏ လိုလားချက်များကို မေးမြန်းပြီး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာလှဟန်က ပထမဦးဆုံး ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ပြဿနာ မရှိသည့်အတွက် နောက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကြို့ကုန်းရှိ ရန်ကုန်စက်မှု တက္ကသိုလ်တွင် ဆွေးနွေးပြီး နေ့လည်ပိုင်း၌ လှိုင်တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများက ဆွေးနွေးပွဲတွင် “ခင်ဗျားတို့အစိုးရ ဘယ်တော့ ဆင်းပေးမှာလဲ” ဟု မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သဖြင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်ပြီး လှိုင်တက္ကသိုလ်သို့ မလာတော့ဘဲ တပ်ခေါက် ပြန်သွားသည့် အတွက် လှိုင်တွင် စောင့်နေသည့် ကျောင်းသားများကို ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးက ဦးဆောင်ပြီး ဆန္ဒပြရာကနေ ဂျွန်လ ၆ ရက်နေ့မှာ ကျောင်းသားအရေးအခင်း ထိုအရေးအခင်းကို ဂျွန်အရေးအခင်းဟု ခေါ်သလို နောက်ဆုံး ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားတွေ ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ သပိတ်စခန်း ပြောင်းဖွင့်ခဲ့သည့်အတွက် ဘုရားပေါ် စစ်တပ်က တက်ဖမ်းဆီးတာခံကြရလို့ ရွှေတိဂုံ အရေးအခင်းဟု ပြောင်းလဲခေါ်ခဲ့ ကြပါသည်။
ဂျွန်အရေးအခင်းအပြီးမှာ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး မြေသျှိုးသွားပြန်ပြီး ၁၉၇၆ ခုနှစ်မတ်လမှာ ပြန်လာခဲ့ကာ မှိုင်းရာပြည့် အရေးအခင်းအတွက် စီစဉ်နေစဉ် မှိုင်းရာပြည့်မဖြစ်မီ တစ်ရက်အလို ၁၉၇၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကမာရွတ် ချည်မျှင်အထည်စက်ရုံအလုပ်သမား ကိုတင်မြင့်၏ တိုက်ခန်း၌ လျှို့ဝှက်စွာ တည်းခိုနေစဉ် အခန်းပိုင်ရှင်က ကြောက်လန့်ပြီး သတင်းပေးသဖြင့် စစ်ထောက်လှန်းရေးမှ လှုံ့ဆော်ရေး စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ မှိုင်းရာပြည့် အရေးအခင်းမှာ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးနှင့်အတူ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သူ ဦးမြဒင်နှင့် ဒေါ်နှင်းမြိုင်တို့လည်း အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး ယင်းအချိန်က နဝမတန်း တက်ရောက်နေသည့် ညီမဖြစ်သူ မလှမြိုင် ခေါ် မိုင်ပိုပိုဒင်နှင့် ညီဖြစ်သူ ဆလိုင်းလှရွှေတို့လည်း ထပ်မံ အဖမ်းခံခဲ့ရပါသည်။ စစ်အာဏာရှင် နေဝင်းအစိုးရက ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကို သေဒဏ်ကြိုးမိန့်၊ ညီမဖြစ်သူ အထက်တန်းကျောင်းသူ မိုင်ပိုပိုဒင် ခေါ် မလှမြိုင်ကို ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ်၊ ညီဖြစ်သူ ၈ တန်း ကျောင်းသား ဆလိုင်းလှရွှေကို ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်၊ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးလှဒင်နှင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်နှင်းမြိုင်တို့ကို အားပေး အားမြှောက်မှု၊ သားသမီးများကို အိမ်တွင် လက်ခံထားမှုနှင့် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်စီ အသီးသီး ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ၃ လ အကြာမှာ အမေနှင့် ညီမ ဖြစ်သူကို သာယာဝတီထောင်၊ အဖေနှင့် ညီဖြစ်သူကို တောင်ငူထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ စစ်ခုံရုံးတွင် ပြင်ဆင်ချက် တင်လျှင် ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေးမယ်ဟု ပြောခဲ့သော်လည်း ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးက “မင်းတို့ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်သာ သတ်လို့ရမယ်။ ငါ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်နှင့် ရပ်တည်ချက်ကိုတော့ ဘယ်တော့မှ သတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့ စစ်ဖိနပ် အောက်မှာ ငါဘယ်တော့မှ ဒူးမထောက်နိုင်ဘူး” ဟု ရဲဝံ့စွာ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းသားအရေးအခင်း ၃ ခုလုံးတွင် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သူ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုစစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်းက ကြောက်လန့်ပြီး သေဒဏ် ချမှတ်ပြီး အယူခံ ကာလ ၃ လပြည့်သည်နှင့် ကြိုးပေးသတ်ပစ်ခဲ့ပါသည်။
ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး၏ မိဘ ညီအကို မောင်နှမများကို အသိမပေးဘဲ အင်းစိန်ထောင်အတွင်း သေဒဏ်ကျ အကျဉ်းသားများ ရရှိမည့် အခွင့်အရေးများကို မပေးဘဲ စစ်အစိုးရက ရက်စက် ယုတ်မာစွာ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ဇွန် ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကို တိတ်တဆိတ် ကြိုးပေးသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ကြိုးပေးသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်နေ့ရက်ကို တရားဝင် ထုတ်ပြန် အသိပေးခဲ့ခြင်း မရှိသည်မှာ ယနေ့တိုင်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အာဇာနည် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးသည် ကြိုးပေးသတ်ဖြတ်ခံရသည့်အချိန်အထိ ကြိုးပေး သတ်ရာတွင် ချက်ချင်းမသေလျှင် သူနိုင်သည်ဟု ပြောဆိုကာ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ရဲဝံ့စွာ ရပ်တည်သွားခဲ့သည်။
အာဏာရှင်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေတ်အဆက်ဆက် မည်သို့ပင် ဖိနှိပ်နေစေကာမူ ကျောင်းသားထုအနေဖြင့် ဘယ်သော အခါမှ ဒူးမထောက်ဘဲ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင် တော်လှန်နေကြမည် ဖြစ်သည်။
“ဦးထွန်းအောင်ကျော်နှင့် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးမူရင်း ဓာတ်ပုံ”
ဒီပုံဟာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ မေလ (ဂျွန်အရေးအခင်းမဖြစ်ခင်) ငါတို့သေနိုင်တယ်ဆိုပြီး အမှတ်တရ ရိုက်ခဲ့ကြတဲ့ ဓာတ်ပုံဖြစ်တယ်။ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး မသေခင် နောက်ဆုံး ရိုက်ကူးခဲ့တယ့် ပုံလည်း ဖြစ်တယ်။
တနှစ်ကျော်အကြာ မှာဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာ ကျဆုံးခဲ့ပြီး ဦးထွန်းအောင်ကျော်(၇၄) ကတော့ 1988အာဏာသိမ်းချိန်မှာ တောခိုးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ ပထမဆုံး ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ထမ်းဆောင်ပြီး ယခုအချိန်ထိ အသက်ရှည်ကျန်းမာလျက်ရှိသည်။
– ထွန်းအောင်ကျော် (၇၄ မျိုးဆက်), ၇၄ ဦးသန့် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှသည် အင်းစိန်ထောင်တွင်းတိုက်ပွဲဆီသို့။
ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် ဇွန် – ၂၅
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် ဇွန် ၂၃-၂၄ ရက် အတွင်း စစ်ကောင်စီမှ ဖမ်းဆီးထားသော အပြစ်မဲ့ အရပ်သား ပြည်သူ ၂၁ ဦးစာရင်းကို ULA/ AA က ယနေ့ ဇွန် ၂၅ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည်။ ယင်း ဖမ်းဆီးခံထားခဲ့သော ၂၁ ဦးတွင် အသက်မပြည့်သေးသည့် လူငယ် ၃ ဦးပါဝင်သည်ဟုဆိုသည်။
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ညောင်လေးပင်ခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေရှိ အင်းနက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်းသို့ အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်က ယနေ့နံနက်(၇)နာရီအချိန်မှ စဉ်ဆက်မပျက် ကျေးရွာသို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လက်နက်ကြီးအလုံးရေ (၄၀)ကျော် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အပစ်မဲ့ ပြည်သူ (၅)ဦး ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
(စစ်ကောင်စီတပ်၏ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် အရပ်သားနေအိမ်များပျက်စီးခဲ့)
၎င်းပစ်ခတ်မှုကို ခလရ-၆၀၊ ခမရ-၄၃၉၊ ခမရ-၃၅၁ ပူးပေါင်းတပ်တို့မှ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ ဇေယျာလင်းမှ ဦးဆောင်ကာ ဆိပ်ကြီးနှင့် ညောင်ကုန်းရွာတွင် စခန်းချပြီး အင်းနက်ကျေးရွာအုပ်စုသို့ လက်နက်ကြီးများ ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အင်းနက်ကျေးရွာပြည်သူလူထု (၅)ဦး ဖြစ်သော စောသက်ဝေစိုး အသက်(၃၅)နှစ်၊ ဘယ်ဘက်ခြေသလုံး၊ စောကျော်ကျော် အသက်(၃၀)နှစ် ဘယ်ဘက်ရင်အုံဘေး၊ စောရန်နိုင်ဝင်းအ သက်(၂၇)နှစ် ညာဘက်ခြေသလုံးနှင့် ဘယ်ဘက်ခြေဖမိုး၊ မငြိမ်းငြိမ်းစိုး အသက်(၃၀)နှစ် ညာဘက်ခြေသလုံး၊ ဒေါ်စန်းနွဲ့ အသက်(၆၂)နှစ် ညာဘက်လက်မောင်းတွင် အသီးသီး ပြင်းထန်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြကြောင်း KNU က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
(စစ်ကောင်စီတပ်၏ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရသည့် ပြည်သူများ)
လက်ရှိတွင် ဒဏ်ရာရရှိသူများကို ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ ဆေးဝါးကုသမှု ပေးလျက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ယနေ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ညောင်လေးပင်ခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မှ ကျေးရွာ(၆)ရွာရှိသည့် အင်းနက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ (၆၁၉)လုံး၊ လူဦးရေ (၂၆၂၂)ဦးနှင့် မုန်းမြို့နယ်ရှိ အိမ်ခြေ(၂၇၀)လုံး၊ လူဦးရေ(၁၇၀၀)ဦးရှိသည့် ရန်မျိုးအောင်ကျေးရွာနှင့် အိမ်ခြေ(၁၅၀)၊ လူဦးရေ(၈၅၀)ဦးရှိသည့် နောင်ကုန်းကျေးရွာမှ ပြည်သူလူထု စုစုပေါင်း (၃၄၇၂)ဦးတို့သည် ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရသည်။
ဇွန် – ၂၅ – ၂၀၂၂ ခုနှစ်
စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်လူထုလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်သူလူထုအပေါ် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်သတ်မှုကြောင့် ယမန်နေ့ ဇွန်လ (၂၄)ရက်နေ့ထိ အသက်သေဆုံးခဲ့ရသည့် ပြည်သူ (၂၀၂၁)ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှရသည်။ ထို့အပြင် စစ်ကောင်စီ၏ မတရားဖမ်းဆီးခံရသူ (၁၄၂၈၀)ဦးအထိ ရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ (၁၁၂၁၇)ဦးမှာ အကျဉ်းကျနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း AAPP ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရသိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့တွင် ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်(PLF)များကို ဇွန်လ၂၄ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီတွင် ကိုစိုင်းနေလင်း အပါအဝင် သုံးဦးကို လက်နက်များနှင့်အတူ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့် BGF တပ်ဖွဲ့တို့က ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ စစ်ကောင်စီဘက်မှ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိဘဲ ကိုစိုင်းနေလင်း အသုံးပြုသည့် Facebook အကောင့်မှ တော်လှန်ရေးရဲဘော်များကို ဆက်သွယ်နေ ကြောင်း သိရသည်။ “သူ(အဖမ်းခံရသူ)က အရင်က KNDO မှာ သင်တန်းတက်သွားတာ KNDO တပ်ဖွဲ့ ဝင်တော့မဟုတ်ဘူး ။ လေးကေ့ကော်မှာတုန်းက လက်နက်အရောင်းအဝယ်လုပ်လို့ အတီး (လေးကေ့ကော် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)က ဖမ်းဘူးတယ်။ အရင်က NUC ဆိုပြီးဖွဲ့တယ်။ အခု PLF ဆိုပြီးဖွဲ့ထား တယ် ။ အလှူငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမည်ပျက်စာရင်းထဲပါထားတယ်။ သူ့ကြောင့်ရဲဘော်တွေ အဖမ်းခံရ တာ ပြန်လို့မရတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုလည်း သူဖုန်းဆက်လို့ မြဝတီမှာ သုံးယောက်ထပ်မိသွားတယ်” ဟု ထောက်ပို့ရဲဘော် မကေ က ပြောသည်။
ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ လွိုင်လင်လေးမြို့၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက် အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဆရာ ၊ ဆရာမ ၆ ဦးဟာ မနေ့ ဇွန် ၂၄ ရက် မနက် ပိုင်းက ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက် စာသင်ကြားတာတွေ မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ကျောင်းသားမိဘတွေ ဆီက သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဖြစ်စဥ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွိုင်ကော်မြို့နယ် ၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး ၊ တာဝန်ရှိသူ တယောက်က ” မနေ့က မနက်ပိုင်း ၁၁ နာရီဝန်းကျင်မှာ မျက်နှာဖုံးစွပ် လက်နက်ကိုင် လူ ၁၂ ယောက်က ကား ၂ စီးနဲ့ ကျောင်းထဲကိုရောက်လာပြီး ၊ မူလတန်းပြ ဆရာ ဦးကောင်းဇေယျာငြိမ်း၊ ဦးအောင်ဇော်ထွေး၊ အထက်တန်းပြ ဆရာမ ဒေါ်နန်း၊ အလယ်တန်းပြ ဆရာမများဖြစ်တဲ့ ဆရာမ ဒေါ်စုလေးငယ်၊ ဆရာမ ဒေါ်ခင်သန်းနဲ့ ဒေါ်မြထွေး တို့ဖြစ်ပြီး လက်ရှိချိန်ထိတော့ ဆက်သွယ်မရသေးဘူး ” လို့ ပြောပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ် ဆိုက်ခေါဝ်ကျေးရွာတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ လက်အောက် ခံ PNO/PNA ပအိုဝ်းပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင် ထွက်ကောဝိဒက ဒေသခံ နန်းခမ်းအွမ်ကို ၎င်း၏ နေအိမ်ရှေ့တွင် သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်ခဲ့ခြင်းကို တစ်စုံတစ်ရာ အပြစ်ပေး အရေးမယူသည့် PNO/PNA လုပ်ရပ်ကို ပြင်းထန် စွာရှုတ်ချကြောင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကော်မတီက ယမန်နေ့ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၌ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ နန်းခမ်းအွန်၏ ရုပ်အလောင်းကို နေအိမ်သို့ သယ်ဆောင်ရန် မိသားစု ဝင်များ၏တောင်းဆိုမှုကို PNA မှ သယ်ဆောင်ခွင့်မပြုဘဲ မိသားစု သဘော ဆန္ဒမပါဘဲ တောင်ကြီးမြို့ တွင်သာ သင်္ဂြိုဟ်စေခြင်းစသည့် PNA ၏ လုပ်ရပ်များအပေါ် ပအိုဝ်းအမျိုးသား နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ ကော်မတီအနေနှင့် ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချကြောင်းနှင့် ထွက်ကောဝိဒ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် လုပ်ရပ်အပေါ် ထိရောက်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှု အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ကျူးလွန်ခံရသူ မိသားစု တရားမျှတ မှု ရရှိရေး လုပ်ဆောင်ရန် လေးနက်စွာ တိုက်တွန်းကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြသည်။
ချင်းပြည်နယ် မရာမျိုးနွယ်စုဒေသ တွင် မိုးရာသီ ကာလအတွင်း malaria- ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ရောဂါ စသဖြင့် အမျိူးမျိူးသောရောဂါ များပြားပြီး ပျံ့နှံ့ တတ်သည့် ရာသီ အချိန်တွင် ကျန်းမာရေးမှုး ( Beilakho) နှင့် သူနာပြုများက ဆေးဝါးပစ္စည်း အခမဲ့ ကုသမှုဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း သတင်းရရှိပါ သည်။ မရာ ရွာပေါင်း ရွာပေါင်း၃၀ကျော်ကို Health Department- Dr. Beilakho မှ ဦးဆောင်ပြီး လူနာ ပေါင်း အယောက် ၁,၀၀၀ ကျော် အခမဲ့ စစ်ဆေးကြည့်ရှု့ ကုသ ပေးခဲ့ကာတစ်ချို့သော ရွာ နေရာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမူကြောင့် ဆရာဝန် ကိုယ်တိုင် မရောက်ရှိနိုင်ပဲ ဆေးဝါးများကို ပို့ပေးခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ အင်္ဂဘိုကျေးရွာအနီးတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ စစ်ကား ၄ စီး ယာဉ်တန်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က မိုင်းခွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာ စစ်ကား ၂ စီး ထိမှန်ပြီး Double Cab ပွိုင့်ကား ၁ စီးမှ တိမ်းမှောက်သွားကြောင်း ကျိုက်ထို တော်လှန်ရေးအင်အားစုက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ Double Cab နှစ်စီးဖြင့် စစ်ကား ကြီး ၂ စီးကို ရှေ့ပွိုင့်၊ နောက်ပွိုင့် ယူကာ ဝေါမြို့ဘက်မှ ထွက်ခွာလာ သော စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းကို ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၄၀ မိနစ် အချိန်တွင် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စစ်ယာဉ်တန်း တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် မုပ္ပလင်ဘက်မှ အိမ်စီးကား ၃ စီးဖြင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ တပ်ကူများ ထပ်မံရောက်ရှိလာကြောင်း ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော KNLA နှင့် သထုံခရိုင် PDF တပ်ရင်း ၃ အဖွဲ့တို့ အထိအခိုက်မရှိဘဲ ဆုတ်ခွာ နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းအုပ်စု မှော်ပေါင်းစုံ သပိတ် စစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ချီတက်ခဲ့ကြပြီး “ဖားကန့်သားတွေ မအကြနဲ့ ရုန်းကြ ကြွကြ ထကြလော့ ” စာသားကိုင်ဆွဲ ဆွဲကာ အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ် စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသည်။
တနင်္သရီတိုင်း၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာ တော်လှန်ပြည်သူတွေက အကြမ်းဖက်စစ်တပ် ကျရှုံးရေး ဆန္ဒပြသပိတ်နဲ့ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးခြင်း အကြို အထိမ်းအမှတ်ဆန္ဒပြပွဲကို ဒီနေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြ တော်လှန်ပြည်သူတွေက ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ပြောခဲ့တဲ့ ‘မင်းတို့ စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ငါဘယ်တော့မှ ဒူးမထောက်ဘူး’ ဆိုတဲ့စာသားကို ကိုင်ဆွဲပြီး အကြမ်းဖက်စစ်တပ် ကျရှုံးရေး ဟစ်ကြွေးမှု ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
ကလေးမြို့ ပင်မသပိတ် အင်အားစုများ ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် “မင်တို့စစ်ဖိနပ် အောက် ဘယ်တော့မှ ဒူးမထောက်ဘူး” ဆိုတဲ့စာသားကိုင်ဆောင်ပြီး စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေး ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်များ ဝန်းရံပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးနေသည့် ရန်ကုန်မြို့တွင် အခြေခံပညာကျောင်းသားလူငယ်များ အစည်း အရုံး(အကလ-ဗဟို) မှဦးဆောင်ကာစစ်အာဏာရှင်ဆန့် ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါသပိတ်တွင် “မတရားဖမ်းဆီးအကြမ်းဖက် ထိန်းသိမ်းခံ ထားရ သောနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားခြွင်း ချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးရန်” နှင့် “ငါတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် သာသတ်လို့ရမယ်ငါတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ရပ်တည်ချက်တွေက ဘယ်တော့မှ သတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး” ဆိုသည့်ကြွေးကြော်သံများဖြင့် လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။
ရန်ကုန်တွင် ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ်၀င် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၊ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ_DPNS ၊ လူ့ဘောင်သစ်လူငယ်_YNS ၊ Yangon’s Rebels Strike Commitee-YRSC ၊ ထား၀ယ်မြို့နယ် အခြေခံပညာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ(ထ၀အကသ) ၊ East Yangon University Students’ Union_EYUSU (ရရတကသ) တို့ ပူးပေါင်းကာ ချင်းလူမျိုး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးခြင်း ၄၆ နှစ်​ပြည့် အဖြစ် ဖက်ဆစ် စစ်တပ် တော်လှန်ရေး ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေး သံဃသမဂ္ဂ သပိတ် စစ်ကြောင်း ဆရာတော်များ ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပရိတ်ရွတ် မေတ္တာပို့ပြီး ဖက်ဆစ် စစ်တပ် တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေး သံဃသမဂ္ဂ ဆရာတော်များ ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ တွင် “သံတိုင်ကြားက ကြွေးကြော်သံ လူထုမိခင် အတွက် အားမာန် ပြည်သူအားလုံးကတော်လှန် အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြိုဖျက်ကြ” စာတန်း ကိုင်ဆောင် ကာ စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး ညသပိတ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
မန္တလေး ပြည်ကြီးတံခွန် ဆရာတော် ဦးဆောင်သော ပြည်ကြီးတံခွန် သပိတ် အင်အားစုများ ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဖက်ဆစ် စစ်တပ် တော်လှန်ရေး ညသပိတ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အကြမ်းဖက် စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ဖြတ် ချေမှုန်းရေး စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ယင်းမာပင်-ဆားလင်းကြီး ရွာပေါင်းစုံသပိတ်စစ်ကြောင်းသည် ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက် နံနက်တွင် ၄၇၁ ရက်မြောက်အဖြစ် ကြွေးကြော်ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်။
ယင်းမာပင်မြို့နယ် မြောက်ခြမ်း ရွာပေါင်းစုံ သပိတ် စစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ တွင် စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေး ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ် “ကယ်တင်ရှင်မရှာ ဒို့ကျေးရွာ” သပိတ် စစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဖက်ဆစ် စစ်တပ် တော်လှန်ရေး ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းမာပင်မြို့နယ်တွင် သွေးမအေးတဲ့ ရွှေနွယ်သွေး သပိတ် စစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်တွင် “အောင်လံ လွှင့်မည် ရွှေရေ ကြည်” သပိတ် စစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အကြမ်းဖက် စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေး ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်တွင် အားမာန်သစ် သပိတ် စစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အကြမ်းဖက် စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေး ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘုတလင်မြို့နယ် ကျေးလက်သပိတ်ကို ယင်းမာပင်ဆားလင်းကြီး သပိတ်ဦးဆောင်သူများနှင့် အတူ ရန်ကုန်သပိတ်လူငယ်များ၊ ဒေသခံပြည်သူလူထု ပူးပေါင်းကာ အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ် စစ်အာဏာရှင် အလိုမရှိကြောင်းချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဒီပဲရင်းမြို့နယ်တွင် ဒီပဲယင်းပြည်သူများနှင့် ဒီပဲယင်းအမျိုးသမီးသပိတ်ဦးဆောင်သူများ၊ ရွာပေါင်းစုံ သပိတ်ဦးဆောင်သူများ၊ ရန်ကုန်သပိတ်မှ လူငယ်တစ်ဦးတို့ ပူးပေါင်းကာ အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ် စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး တောင်ယာသပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ တမူးမြို့န်ယတွင် ABSDF (အနောက်ပိုင်း) ကျောင်းသား တပ်မ တော် နှင့် PDF-CEU တို့ ၏ ပူးပေါင်း စစ်ဆင်ရေးတွင် စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၅ ဦးသေဆုံးကြောင်း PDF-CEU က သတင်းထုတ်ပြန် သည်။ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန် ABSDF (အနောက်ပိုင်း) ကျောင်းသား တပ်မတော် နှင့် PDF-CEU ပူးပေါင်း စစ်ဆင်ရေးအဖြစ် တမူး မြို့နယ်ဆရာစံရွာအနီး စစ်တပ်နှင့် ၄၅ မိနစ်အကြာ ထိတွေ့တိုက်ပွဲ ဖြစ် ရာ စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၅ ဦးသေဆုံးကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် MDY-PDF မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဆေးတပ်သား Roll1medic ရဲဘော်တွေက ရောက်ရှိနေတဲ့ ရွာက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်ရဲ့ ကလေးကို အောင်မြင်စွာ မွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့ ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကလေးမှာ ယောကျ်ားလေးဖြစ်ပြီး မိခင်ရော ကလေးငယ်ပါ ကျန်းမာလျက်ရှိ ပါတယ်။ MDY-PDF ရောက်ရှိတဲ့ ဒေသခံ လူထုရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ လူမူရေး လုပ်ငန်းတွေကို အမြဲကူညီ စောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်လို့ MDY-PDF ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။
ဝက်လက်မြို့နယ် လူထု သပိတ်စစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးခြင်းနှစ်ပတ်လည် အဖြစ် စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး ဝက်လက် တော်လှန်ရေး တပ်ဦး (WPRF)၊ GZ Special Take Force-Wetlet ၊ ဝက်လက်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် တပ်ရင်း (၁၅) ၊ မတ္တရာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ် ရေးအဖွဲ့ (ပကဖ) ၊ စဥ့်ကူးမြို့နယ်ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ (ပကဖ) တို့မှ သပိတ်စစ်ကြောင်း လုံခြုံရေး အတွက် လိုက်ပါဝန်းရံခဲ့​ကြောင်း သိရသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဝင်ရောက်တပ်စွဲခွင့်ပေးခြင်းတို့ကြောင့် ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ အား သွယ်တန်းထားသည့် ပင်မဓာတ်အားလိုင်း မီးတိုင်အား အမိမြေတော်လှန်ရေး အဖွဲ့နှင့် Young People Force ( YPF ) အဖွဲ့တို့က ဇွန် ၂၄ ညပိုင်းတွင် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု ထုတ်ပြန်သည်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းများခိုးယူနေသည့် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ထပ်မံဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်နေပါက အခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဆက်လက် တိုက်ခိုက် သွားမည်ဟုလည်း သတိပေးသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ မြင်းမူမြို့နယ်အတွင်းက နပဲကြူးဇရပ်အနီးမှာ ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ စစ်ကားတစ်စီးကို ဒေသကာကွယ်ရေး ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေ ဒီကနေ့ (ဇွန်လ ၂၅ ရက်) မနက်ခင်းက မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး မိုင်းထိမှန်မှုကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် အသေအပျောက်ရှိနိုင် တယ်လို့ ဒေသကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ စစ်ကိုင်းမြို့ကနေ မြင်းမူမြို့ဘက် ကို ထွက်ခွာလာတဲ့ အဆိုပါ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ စစ်ကားကို ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Moe Nyo Revolution Force (MNRF)၊ PENTAGRAM ငါးထောင့်ကြယ်အဖွဲ့၊ PEOPLE REVOLUTION FORCE (PRF) နဲ့ People’s Guerillas Commando – Myinmu အဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းပြီး မိုင်း၅လုံးနဲ့ မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။
မန္တလေး- မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး နောင်ချိုမြို့ အေးရှားဝေါ်ဂိတ်အကျော်မှာ စစ်ကောင်စီ၊ ပြည်သူ့စစ်နဲ့ ရဲတွေက ကားသမားတွေကို ငွေအတင်းအဓမ္မတောင်းခံနေတာတွေ ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မန္တလေးဘက်အဆင်းမှာ တစ်နေရာ၊ မူဆယ်ဘက်တက်တဲ့ လမ်းမှာ တစ်နေရာ မိုးကာတဲ ထိုးပြီး နှစ်နေရာစောင့်ပြီး တောင်းနေတာလို့ အမည်မဖော်လိုသူတဲ့ ကားသမားတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ပထမပတ်ကနေစတင်ပြီး ကားသမားတွေဆီကို ငွေအတင်းအဓမ္မတောင်းခံနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလက ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ပြဿနာ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ဆိုဗိယက်ယူနီယံ၏ ဩဇာဖြန့်ကျက်ရေးဝါဒကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိကိုလိုနီစနစ် ဖျက်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ ထင်ရှားပေါ်လွင်လာခဲ့သည်။ တူဗား၊ အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများ၊ ဘောလတစ်နှင့် အာရှအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲအတွင်း ယူဗီယက်ယူနီယံ၏ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခြင်း ခံရသည်။ ဆိုဗီယက်သည် အရှေ့ဥရောပရှိနိုင်ငံများ၊ အရှေ့ဂျာမနီတို့ကို သူ၏ အခြွေအရံနိုင်ငံများအဖြစ် တည်ထောင်လိုက်သလို တရုတ်နှင့် ကိုရီယားရှိ တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း ထောက်ခံအားပေးသည်။ အခြွေအရံနိုင်ငံများသည် လွတ်လပ်ပြီး အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှု ရှိသော်လည်း ၁၉၅၆ ဟန်ဂေရီတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှု၊ ၁၉၆၈ ခုနှစ် ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယား၏ ပရက်နွေဦးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်လားသောအခါ ဆိုဗီယက်ယူနီယံသည် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အခြေခံမူများကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လျက် နှိပ်ကွပ်ခဲ့တော့သည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင်လည်း ကွန်မြူနစ်အစိုးရကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကွဲအုပ်စုများက တိုက်ခိုက်သည့်အခါ အစိုးရဖက်မှ ထောက်ခံအားပေးရန် ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့လေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မက်စ်-လီနင်ဝါဒနှင့် သဘောတရားများသည် ကိုလိုနီအရှင်သခင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ရုပ်သေးအစိုးရများကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်သည့် တတိယကမ္ဘာရှိ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများအပေါ် ကြီးမားသောဩဇာသက်ရောက်မှု ရှိခဲ့သည်မှာကား အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒသည် တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံ အများအပြားရှိ နယ်ချဲ့ကိုလိုနီဝါဒ ဆန့်ကျင်ရေးအုပ်စုများကို ညီညွတ်စေသည့် ရှေ့ဆောင်သဘောတရားတရပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယူဗီယက်ယူနီယံ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို သူ၏အကျိုးစီးပွားအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဟု ရှုမြင်ခဲ့သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများကို ထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။ စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလတစ်လျှောက်လုံး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် သူတို့၏စီးပွားနှင့် နိုင်ငံရေးစီးပွားများကို ကာကွယ်ပေးသည့် စစ်အုပ်စုများကို မွေးမြူကာ ထောက်ခံအားပေးခဲ့သည်။ ချီလီမှ ဩဂတ်စတိုပီနိုချေး၊ အင်ဒိုနီးရှားမှ ဆူဟာတိုစသည့် ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး စစ်အုပ်စုများမှာ ထင်ရှားသည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်စေရန်အတွက် အာဏာသိမ်းပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအစိုးရများကို ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းနှင့် စစ်ရေးအရ ကျူးကျော်စွက်ဖက်ခြင်းများ အပါအဝင် နည်းပေါင်းစုံကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအစိုးရများ၏ ဖိနှိပ်မှုများကို တုံ့ပြန်သည့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်လှုပ်ရှားမှု အများအပြားမှာ ဆိုဗီယက်၏ လှုံ့ဆော်ချုပ်ကိုင်မှုများအဖြစ် စွပ်စွဲပုံဖျက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရလေသည်။
အာရှတိုက်တွင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံသည် မွန်ဂိုလီးယားကို အခြွေအရံနိုင်ငံအဖြစ် သိမ်းသွင်းပုံဖော်လိုက်သည်။ သို့သော်လည်း ဒုတိယအရှေ့တာကတ်စတန်သမ္မတနိုင်ငံထူထောင်ရေးကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး မန်ချူးရီးယားကိုလည်း တရုတ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ပါသည်။ တရုတ်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲမှ ကွန်မြူနစ်တို့အောင်ပွဲအဖြစ် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ပေါ်ထွက်လာသည်။ အာရှတိုက်ရှိ ကိုလိုနီစနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံများက သူတို့၏ ဩဇာဖြန့်ကျက်နေရာအဖြစ် အသုံးချကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကိုရီးယားစစ်ပွဲက စစ်အေးတိုက်ပွဲဗဟိုစုံချက်ကို ဥရောပဆီမှ အာရှတိုက်ဆီသို့ ရွေ့ပြောင်းလာစေခဲ့၏။
၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒယသည် ဗြိတိသျှအင်ပါယာမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှအင်ပါယာသည် တဖြေးဖြေးဩဇာလျှော့ကျလာနေသော်လည်း ဗြိတိသျှဓနသဟာယဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် အခြေနေကိုထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှဓနသဟာယအဖွဲ့ကြီးမှာ ၁၉၄၉ ခုနှစ်ကတည်းက နိုင်ငံများ၏ လွတ်လပ်သောဆန္ဒအရ တန်းတူရေးမူဖြင့် စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်လေသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရသောအခါ နိုင်ငံဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လူမျိုးပေါင်းစုံပဋိပက္ခများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ အစ္စလမ်မစ်ပါကစ္စတန်နှင့် ဘာသာရေးစွက်ဖက်မှုကင်းသောအိန္ဒိယ တို့အဖြစ်ကွဲထွက်သွားခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်တို့မရောက်မီက အိန္ဒိယပြည်မကြီးရှိ မည်သည့်အင်ပိုင်ယာရှင်များကမှ ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိခဲ့သည့် အရှေ့မြောက်ဒေသသည် အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဒေသ သူပုန်ထမှု၏ အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သည် ပါကစ္စတန်ပြည်မှခွဲထွက်ကာ လွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်သည် ဗြိတိသျှတို့ထံမှ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သော်လည်း ဗြိတိသျှဓနသဟာယအဖွဲ့တွင် မပါဝင်ခဲ့ပေ။ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူ ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခသည် အစိုးရအဆက်ဆက်အတွက် ဖြေရှင်းရခက်ခဲသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားသည် ဒတ်ချ်(နယ်သာလန်) ထံမှ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ နယ်သာလန်သည် ဒတ်ချ်နယူးဂီနီကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း အင်ဒိုနီးရှားက ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ရန် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ကုလသမ္မဂ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့်ကျင်းပသော လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပွဲသည် ပြဿနာများရှိသော်လည်း အနောက်နယူးဂီနီသားများက အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ပူးပေါင်းမည်ဟု သူတို့ကံကြမ္မာကိုသူတို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ပေါ်တူဂီက အ‌ရှေ့တီမောအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားက ချက်ခြင်းလိုလိုပင် ကျူကျော်သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။
ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွင် ၁၉၈၅ ခုနှစ်မတ်လ၌ မီခေးလ်ဂိုဘာချော့ဗ် အာဏာရရှိလာပြီးနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာစစ်အေးတိုက်ပွဲ အရှိန်လျော့ကျလာသည်။ ဂိုဘာချော့ဗ်က စီးပွားရေးမူဝါဒတင်းကြပ်မှုများကို ဖြေလျှော့လာသကဲ့သို့ ဆိုဗီယက်လက်နက်ကိုင်အင်အားနှင့် ဥရောပရှိ နြူကလီးယားလက်နက်အရေအတွက်ကို လျှော့ချလိုက်သည်။
၁၉၈၉-၉၀ တွင် ဆိုဗီယက်အုပ်စုဝင်နိုင်ငံများဖြစ်ကြသော ပိုလန်၊ ဟန်ဂေရီ၊ ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယား၊ အရှေ့ဂျာမနီ၊ ဘူလ်ဂေရီးယား၊ ရိုမေးနီးယားနှင့် မွန်ဂိုလီးယားတို့ရှိ ကွန်မြူနစ်အစိုးရများပြိုကျသွားလေသည်။ အရှေ့ဂျာမနီနှင့် အနောက်ဂျာမနီပူးပေါင်းသွားပြီး ချက်ကိုဆလိုဗက်ကီးယားသည် ချက်နှင့်ဆလိုဗက်ကီးယား သမ္မတနိုင်ငံနှစ်ခုအဖြစ် ကွဲသွားသည်။ ၁၉၉၀ တွင် ယူဂိုဆလပ်ဗီးယားသည် မူလပါဝင်သည့် ရီပက်ဗလစ်ယူနစ် ၆ ခုအတိုင်း နိုင်ငံ ၆ နိုင်ငံအဖြစ် ပြင်းထန်သော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားပြီးပြိုကွဲသွားသည်။ မူလက ဆားဗီးယားရီပက်ဗလစ်ရှိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော ကိုဆိုဗိုသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုခံရမှု နဲပါးခဲ့သည်။
၁၉၉၁ ခနှစ်တွင် ဂိုဘာချောဗ်သည် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု၏ သမ္မတအဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ပြီး ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုသည်လည်း အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်သော နိုင်ငံ ၁၅ နိုင်ငံအဖြစ် နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကွဲထွက်သွားကြသည်။ အဆိုပါနိုင်ငံသစ်များမှာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြပြီး အများစုက ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် လွတ်လပ်သောဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးကြလေသည်။ အဆိုပါသမ္မတနိုင်ငံသစ်များအတွင်း အက်ခါးဇီးယား၊ တောင်ဩဆက်ရှား၊ ထရန်နစ္စတြီးယားနှင့် နာဂေါ်နိုကရာဘာ့ရှ်ဒေသလေးခုသည် အချုပ်အခြအာဏာပိုင်လွတ်လပ်ရေးကို ကြေငြာခဲ့ကြသော်လည်း နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုကို မခံရပေ။
ပြည်တွင်းစစ်ဆယ်စုနှစ်များစွာ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အရှေ့တီမော၏ လွတ်လပ်ရေးကို အင်ဒိုနီးရှားက အသိမှတ်ပြုရလေသည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ကွန်မြူနစ်တို့က ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကို အနိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကို တည်ထောင်လိုက်ကြသည်။ ကူမင်တန်ပါတီခေါင်းဆောင်သည့် တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရသည် ထိုက်ပေမြို့သို့ ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရကာ ထိုက်ဝမ်ကျွန်းနှင့်အနီးအနားကျွန်းများတစ်ဝိုက်တွင်သာ အာဏာသက်ရောက်မှုရှိတော့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံအကြား ထိုက်ဝမ်ကျွန်း၏ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်စိုးမှုနှင့် နိုင်ငံရေးအဆင့်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားကြရလေတော့သည်။
တစ်ချို့သော ကမ္ဘာနေရာဒေသများတွင် ပြင်းထန်သော ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်လှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ထိုင်ဝမ်၊ မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်၊ ကိုဆိုဗိုနှင့် တောင်ဩဆက်ရှားတို့တွင်ကဲ့သို့ လက်တွေ့တွင် လွတ်လပ်ရေးရနေသောဒေသများ ရှိနေကြသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့၏လွတ်လပ်ရေးကိစ္စမှာ အဓိကနိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် နိုင်ငံအများနှင့် အငြင်းပွားနေရခြင်းမျိုး ရှိတက်သည်။ ကာဒစ္စတန်၊ ဘလိုချီစတန်၊ ချေချင်ညာနှင့် ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံများကဲ့သို့ လက်တွေ့တွင် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသောဘဝဖြင့် ဆက်လက်နေထိုင်ကြရသည့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်လှုပ်ရှားမှုများလည်း ရှိနေကြသေးသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းနှစ်များကတည်းက အမျိုးသားကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အခြေခံမူ တရားဝင်ဖြစ်ရေးပြဿနာက နိုင်ငံများအတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်မှုများကို တိုးပွားစေသည်။ အုပ်စုခွဲများက ပိုမိုကြီးမားသော ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေး ကြိုးပမ်းမှုများရှိသလို၊ လုံးဝခွဲထွက်ရေးကြိုးပမ်းသည်များလည်း ရှိသည်။ အချို့မှာ အုပ်စုအတွင်း(သို့မဟုတ်) အခြားအုပ်စုများနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီး လက်နက်ကိုင်ဖြေရှင်းကြသည်အထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ကြသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုသစ်များအတွက် နိုင်ငံတစ်ကာ၏ တုံ့ပြန်မှုမှာ တသမတ်တည်းမရှိဘဲ မကြာခဏဆိုသလို အခြေခံမူအပေါ်ထက် နိုင်ငံရေးအရ ချဉ်းကပ်တုံပြန်တက်လေ့ရှိသည်။ သက္ကရာဇ်၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ကုလသမ္မဂထုန်ပြန်ကြေညာချက်က “ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားကျူးကျော်သိမ်းပိုက်မှုအောက်တွင် ဆက်လက်ရှိနေသော ပြည်သူလူထု၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်” ဟုသာ ဖော်ပြခဲ့သည်။
အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအတော်များများမှာ ၎င်းတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံးအခြေခံဥပဒေများတွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို ခွဲထွက်ရေးဖြင့်တွဲလျက်အသိမှတ်မပြုကြချေ။ အခြေခံဥပဒေတော်တော်များများမှာ အဆိုပါခွဲထွက်ခွင့်ကို အသေအခြာတားမြစ်ထားကြသည်။ သို့သော်လည်း တစ်ချို့နိုင်ငံများတွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို ပိုမိုကြီးမားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံဖြင့် ခွင့်ပြုထားခြင်းများရှိသလို ခွဲထွက်ခြင်းကို ချွင်းချက်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ခွင့်ပြုထားသော ပုံစံများလည်းရှိသေးသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အဗရာဟင်လင်ကွန်းက ခွဲထွက်ခြင်းကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အသိမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ၁၈၆၉ ခုနှစ်က ဗဟိုတရားရုံးချုပ်၏ “တက္ကဆက်နှင့် ဝှိုက်” ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် ခွဲထွက်ခွင့်သည် “တော်လှန်ရေးနည်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်များ၏သဘောတူညီမှုဖြင့်လည်းကောင်း” ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်ကကျင်းပသော ဗြိတိသျှပါလီမန်က ဩစတြေးလျအနောက်ပိုင်းခွဲထွက်ခွင့်ကို ဩစတြေးလျတစ်နိုင်ငံလုံး၏ အများစုမဲဖြင့်သာ ခွဲထွက်နိုင်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ မူလသတ်မှတ်ထားသည့် အနောက်ပိုင်းဩစတြေးလျနေပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒခံယူပွဲ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ထောာက်ခံမဲသည် မလုံလောက်ဟုဆိုကာ ပယ်ချခဲ့သည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်များအာဏာမရရှိမှီ ၁၉၃၁ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံပုံစံအတိုင်း ခွဲထွက်ခွင့် ပါဝင်ခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမတည်ထောင်မီနှင့် တည်ထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ပါတီကခွဲထွက်ခွင့်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး ခွဲထွက်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့်စာပိုဒ်များကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထို့အတူ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်လည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အခြေအနေတစ်ချို့အောက်တွင် ခွဲထွက်ခွင့်ကို ပြဌာန်းပေးခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ခွဲထွက်ခွင့်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဩစတြီးယား၊ အီသီယိုပီးယား၊ ပြင်သစ်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီးဗစ်နိုင်ငံတို့၏ အခြေခံဥပဒေတွင် ခွဲထွက်ခွင့်ပါဝင်သည်။ ဆွတ်ဇလန်နိုင်ငံတွင် လက်ရှိအနေအထားမှခွဲထွက်ခွင့်ကိုရော၊ ကန်တုံအသစ်(ယူနစ်အသစ်) ဖွဲ့စည်းမှုကိုပါ ခွင့်ပြုထားသည်။ ကနေဒါမှ ကွိဘက်ပြည်နယ်ခွဲထွက်ရေးအဆိုပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကနေဒါဗဟိုတရားရုံးချုပ်၏ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ပြည်နယ်တွင်းရှိပြည်သူများ၏ ရှင်းလင်းသောအများစုထောက်ခံမဲနှင့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကို ကနေဒါဖက်ဒရေးရှင်းတွင် ပါဝင်သည့်ယူနစ်အားလုံး၏ အတည်ပြုချက်တို့ ရရှိမှသာလျှင် ခွဲထွက်နိုင်သည်ဟု ဆိုလေသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ဆိုရသော် ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုကြီးပါဝင်သော ကုလသမ္မဂအဖွဲ့ကြီးအနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြားကျူးကျော်သိမ်းပိုက်မှုခံနေရသော ကိုလိုနီနိုင်ငံပြည်သူများ၏ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးရေး လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် ရှေ့ဆောင်သဘောတရား တစ်ရပ်အဖြစ်ခံယူပြီး အမေရိကန်၊ အိန္ဒိယ၊ ရှရှားဖက်ဒရေးရှင်း၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံအများစုမှာ ခွဲထွက်ခြင်းကို ခွင့်မပြုကြကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအခွင့်အရေးများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရေးနှင့် ခွဲထွက်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံသစ်ထူထောင်မှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများဆီသို့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ဖြေလျှော့ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပိုမိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းများကိုသာ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါပေသည်။
(No. 45, June 24, 2022)
၁။ KIA အရာရှိတစ်ဦးကို ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့မှ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွား၊ သေဆုံးမှုရှိနိုင်ဟုဆို
ဝိုင်းမော်မြို့နယ် အောင်မြေ ၂ ကျေးရွာတွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အရာရှိတစ်ဦးကို စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ မှ ဇွန်လ ၂၂ရက်နေ့ သေနတ် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ မည်သည့် နေရာ တွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်ကို မသိရှိရသေးကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ ယမန်နေ့ ၂ နာရီဝန်းကျင် အောင်မြေ ၂ ကျေးရွာ ရပ်ကွက် ၂ တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်နေသူ ၂ဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် ဝင်နားနေစဉ် ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့မှ လာရောက် ဝန်းရံ ပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့် KIA အရာရှိတစ်ဦး သေနတ်ထိမှန်ကာ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသည်ဟု မျက်မြင်သက် သေ အောင်မြေ ၂ ဒေသခံတစ်ဦးက KNG သတင်းဌာနကို ပြောဆိုသည်။ “KIA အဖွဲ့က မူးယစ်ဆေးရောင်းတဲ့နေရာကနေ လူ ၂ ယောက်ကို ဖမ်းလာတယ်။ လမ်းမှာ တစ်ယောက်က လွတ်သွားတယ်။ အဲ့လွတ်သွားတဲ့သူက အောင်မြေ ၁ မှာရှိတဲ့ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ကို သွားတိုင်လိုက်တာ။ KIA ကလည်း နေအိမ်တစ်ခုမှာ ဖမ်းလာတဲ့ တစ်ယောက်ကို စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်နေ တဲ့အချိန် ကြားမှာ မိနစ် ၃၀ လောက်ဘဲကွာတယ်။ ခဏဆို ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က သုံးဘီးကားနဲ့ လာပြီး KIA အဖွဲ့ရှိနေတဲ့ အိမ်ကိုဝိုင်းပြီး သေနတ်တွေနဲ့ အကြီးအကျယ်လာပစ်ပြီလေ။ အဲ့မှာ တစ်ယောက်ထိသွားတယ်။ ဒဏ်ရာရသွားတော့ မပြေးနိုင်တော့ဘူး။ အဲ့မှာ လဲကျသွားတော့ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က သယ်သွားတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
KIA စစ်သားသည် သူ၏ ခြေထောက်တစ်ဖက်နှင့် ဝမ်းဗိုက် တစ်နေရာ စသော ၂ နေရာတွင် ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရှိခဲ့ သဖြင့် လက်ရှိတွင် အသက်သေဆုံးမှု ပိုမိုများနိုင်ကြောင်း သူကယခုလို ဆက်လက်ပြောဆိုထားသည်။ “သေနတ်ထိမှန်ပြီး ပြည်သူ့စစ်က ဖမ်းသွားတဲ့သူက သေသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ အသက်ရှင်ဖို့ အလားအလာမရှိနိုင်လောက် တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သေနတ်မှန်ပြီး လှဲကျသွားတဲ့အချိန် သွေးတွေအများကြီးမြင်ရတယ်။ အဲ့မှာတောင် သူသတိမရတော့ဘူး။ ပြီးရင် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က သေနတ်တွေနဲ့ ပြန်ရိုက်နက်။ ဘာသတိမရတော့ဘူး။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ သယ်သွားကြတယ်”ဟုပြောဆို သည်။ အဆိုပါ KIA အဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးသွားသော မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချသူ ၂ဦးသည် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်သူများဖြစကြပြီး ဖမ်းဆီးသွားသော ၂ ဦးအနက်တစ်ဦး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကို သွားရောက်တိုင် တန်ခဲ့ရာ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဘက်မှ စစ်အင်အား ၁၀ ဦးကျော်ခန့် အပါ KIA ရှိနေသည့် နေအိမ်အတွင်းသို့ ဝိုင်းရံပစ်ခတ်တိုက် ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2022/06/23/jun23-yl2/
၂။ SSPP/SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦး ကွယ်လွန်
သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA မှ ပြောရေးဆိုခွင့်တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ကွယ်လွန် သွားကြောင်း သတင်းသိရသည်။ SSPP/SSA မှ ပြောရေးဆိုခွင့်တာဝန်ရှိ ဗိုလ်မှူးသန်းအောင်သည် (ဇွန် ၂၂)ရက် ညပိုင်းတွင် ဗဟိုဌာနချုပ်၌ ကွယ်လွန်သွားကြောင်း နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းများမှ သိရသည်။ “ ဟုတ်ပါတယ်။ သူကွယ်လွန်သွားပြီ။ မနက်ဖန် သူ့ရုပ်အလောင်းကို သဂြိုလ်မယ်” ဟု SSPP/SSA နီးစပ်သည့် သူတစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ ဗိုလ်မှူး သန်းအောင်သည် SSPP/SSA ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် ပါတီတပ်ဖွဲ့၏ ဗဟိုဌာနချုပ်မှ အတွင်းရေးမှူး တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်မှူးစိုင်းသန်းအောင်၏ ကြွင်းကျန်ရုပ်အလောင်းကို ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် သဂြိုလ်မည်ဖြစ် ကြောင်းလည်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/28754
၃။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးငယ်အများစု ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု မရကြသေးသည့်အတွက် ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွား မည်ကို စိုးရိမ်နေ
စစ်တပ်က တိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ကရင်ပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ မွေးကင်းစနှင့် တစ်နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ထိုးနှံကြရမည့် ကာကွယ်ဆေးများကို အများစု မရကြသေးသည့်အတွက် ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားလာမည်ကို စိုးရိမ်နေရသည်ဟု ကလေးမိခင် များက ပြောသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်အနေဖြင့် မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ၂ ကြိမ်ထိုးနှံရသလို မွေးကင်းစနှင့် အသက် ၁ နှစ်ခွဲ ကလေးငယ်များအနေဖြင့်လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ထားသည့် ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစား အလိုက် ထိုးနှံကြ ရမည်ဖြစ်သော်လည်း အများစုမှာ ကာကွယ်ဆေးမရကြသေးဟု သိရှိရသည်။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်နေ စောဖိုးမူးက “ မိန်းမကိုယ်ဝန်စရကတည်းက ကာကွယ်ဆေးမရခဲ့ဘူး။ ကလေး ၁၁ လရှိပြီး ခုထိကလေးရော မထိုးရသေးဘူး။ ရွာက အစိုးရ ဆေးခန်းမှာလည်း ဆေးမလုံလောက်လို့ ပြန်လာခဲ့ရတယ်။ အများစုက ခုချိန်ထိ ကိုယ်ဝန်သည်ရော ကလေးရော မထိုးနှံကြ သေးဘူးပေါ့နော်။ ခုခေတ်က ရောဂါကပေါများတာနဲ့ ကလေးအတွက် စိုးရိမ်တယ်” ဟု ကေအိုင်စီ သို့ပြောသည်။
မြို့နယ်အသီးသီးရှိ ဆေးရုံများနှင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနဆေးခန်းများတွင် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့က ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များနှင့် ကလေးသူငယ်များကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခဲ့ကြသော်လည်း ဌာနေဒေသများရှိ ကျေးလက် ဆေးခန်းများတွင် ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိသည့်အတွက် ဒေသခံအများစု ကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံခဲ့ကြရကြောင်း ကလေးမိခင် များထံမှသိရသည်။ “ သမီးကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ တစ်ခါမှမထိုးဖြစ်ဘူး။ ကလေး ၁ နှစ်ပြည့်ခါနီးမှ ကာကွယ်ဆေး ခုတစ်ကြိမ်ပဲ ရသေးတယ်။ သွားရလည်းဝေးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ထိုးနေမှန်းလည်း မသိခဲ့ရဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း မပြော ပြဘူး။ အရင်က ရွာအထိ ဆင်းထိုး ပေးတယ်လေ။ ဆေးရုံမှာ ထိုးပေးတယ်ပြောတယ်။ ဝေးတော့လည်း သွားရအဆင်မပြေဘူး။ ပုံမှန်ဆို ၅ ကြိမ်၊ ၆ ကြိမ်ထိုးရမယ့်ဟာကို ခုမှတစ်ကြိမ်ရတယ်ဆိုတော့ ကလေးအတွက် စိတ်ပူတယ်ပေါနော်” ဟု ဝင်းရော် ဒေသမှ နော်မူမူ က ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုကို လာမည် ဇူလိုင် ၁ဝ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်နှင့် ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာန အသီးသီးရှိ ဆေးခန်းများတွင် ကာကွယ် ဆေးထိုးနှံပေးမည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား အသိပေးထားသော်လည်း ဆေးမထိုးနှံရသေးသည့် ဦးရေများသည့်အတွက် ဆေးလုံလောက်မှု မရှိမည်ကို ကလေးမိခင်များက စိုးရိမ်နေလျက်ရှိသည်။
၄။ KIO အုပ်ချုပ်နယ်မြေအချို့တွင် ငှက်ဖျားရောဂါကူးစက်မှု အဖြစ်များနေ
KIO အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ဗန်းမော်မြို့တွင် ငှက်ဖျားရောဂါ ကူးစက်ဖျားနာသူ ယခုလ အတွင်း စုစုပေါင်း ၄၀ ကျော် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိ မိုးရာသီကာလ စစ်ရှောင်စခန်းများနှင့် ကျေးရွာအချို့တွင် ငှက်ဖျားရောဂါပိုး ကူးစက် ဖျားနာသူ များပြားလာခြင်းကြောင့် ငှက်ဖျားပိုး စစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးရည်စိမ်ခြင်ထောင်များ အသုံးပြုနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နေ ကြောင်း ဗန်းမော်မြို့ ကျန်းမာရေးဌာနမှ Dr. Lahtaw Zau Gam KNG ကို ပြောသည်။ “အရင်နှစ် မိုးရာသီက ငှက်ဖျားဖြစ်တဲ့သူ မရှိသလောက်ပဲ။ ဒီနှစ်လယ်လောက်မှ ဖျားတဲ့သူ ၄၀ ကျော် တွေ့ တယ်။ ကျနော်တို့ စစ်ရှောင်စခန်းအချို့တွေမှာ ငှက်ဖျားဖြစ် တဲ့သူ ၂-၃ ယောက်ကို တွေ့တယ်။ ဒါကြောင့် စစ်ရှောင်စခန်းက သူတွေ အားလုံးကို ငှက်ဖျားပိုး ရှိမရှိ စစ်ပေးတယ်။ ဆေးရည် စိမ်ခြင်ထောင်တွေကို အသုံးပြုဖို့ လုပ်နေပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဗန်းမော်မြို့နယ် လနာဇွပ်ဂျာ ၊ဘွမ်စစ် ၊မိုင်ဘတ် ကျေးရွာ ၊ကောင်းဂျာကျေးရွာ နှင့် အင်ဘာပါ နင်းထောန်ဟူးနာပါ ကျေးရွာ များရှိ ဒေသခံပြည်သူများတွင်လည်း ငှက်ဖျားရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ငှက်ဖျားရောဂါကြောင့် ဖျားနာသူများတွင် အသက် ၁ နှစ်ကလေးငယ်များနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများလည်း ပါဝင်နေကြောင်း သိရသည်။ လက်တလော ငှက်ဖျားရောဂါ ကူးစက်ဖျားနာသူများကို ဗန်းမော် KIO ကျန်းမာရေးဌာနမှ ဆေးကုသပေး နေပြီး စစ်ရှောင်စခန်းများ နှင့် ကျေးရွာများတွင် ကျန်းမာရေး ဆေးရည်စိမ်ခြင်ထောင်များ အသုံးပြုရန် လိုက်လံ ပေးဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ငှက်ဖျားရှိမရှိ စစ်ပြီး ဖျားတဲ့သူတွေကို ကျနော်တို့ ကောင်းကောင်း ဂရုစိုက်ဆေးကုသပေးမှာဖြစ်တယ်။ မဖြစ်တဲ့ သူတွေကို လည်း ငှက်ဖျား ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အသိပညာပေးတွေ လုပ်ဆောင်နေတယ်။ ဆေးခြင်ထောင်တွေကိုလည်း ပေးသွားဖို့ လုပ်နေပါတယ်” ဟု Dr. Lahtaw Zau Gam က KNG ကချင်သတင်းဌာနကို ဆိုသည်။ https://burmese.kachinnew s.com/2022/06/24/jun24-lp1/
၅။ ဆီဆိုင်စစ်ဘေးရှောင် ကလေးငယ်များ ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်ပွားနေ
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ် စစ်ဘေးရှောင်ထဲတွင် ယခုရက်ပိုင်း ကလေးငယ်များ ရာသီတုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားနေ ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ဆီဆိုင်မြို့နယ် နောင်ထော်ကျေးရွာတွင် ခိုလှုံလာသော ကရင်နီပြည်မှ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင် လာသည့် စစ်ရှောင် ၃၀၀ ကျော်ရှိရာ လက်ရှိမှာ ရာသီတုပ်ကွေးများဖြစ်ပွားနေပြီး၊ ထိုထဲတွင် ကလေးငယ် အများအပြားဖြစ်နေ ကြောင်း စစ်ရှောင်ကူညီပေးသူများက သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ “ကလေးတွေအဖြစ်များတယ်။ ကလေးငယ် ၁၀ နှစ်သားအောက်တွေ ချောင်းဆိုး ၊ဝမ်းလျှော၊ ဖျားနာနေတာတော့ ၄ ယောက် ရှိတယ်။ ဝမ်းပျက် ဝမ်းနာ ၂ ယောက်ရှိတယ်။ ဆီဆိုင် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့တွေကတော့ နှစ်ပတ် တစ်ခါတော့ လာကြည့်ပေးတယ်“ဟု စစ်ရှောင်များကို ကူညီပေးနေသည့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ပြောသည်။
စစ်ရှောင်ပြည်သူများသည် လက်ရှိမှာ စားနပ်ရိက္ခာများနှင့်အစာအာဟာရများလိုအပ်နေကြောင်း၊ စစ်ရှောင် လာရောက် ကူညီသူများကလည်း ယခင်ထက်နည်းပါးလာကြောင်း သိရသည်။ “တချို့ကပြန်သွားကြတာ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူလည်း မရှိသ လောက်နည်းပါးနေပြီ ။ တချို့နေရာဆိုလည်း လုံးလုံးကို မရှိတော့ဘူး ဒီဆီဆိုင်ဘက်က စစ်ဘေးရှောင်တွေ များတယ်။ မိုးဗြဲ ၊ဖယ်ခုံ ဘက်မှာကော အခုလို ကူညီပံ့ပိုး မရတော့တဲ့ စစ်ဘေးရှောင်အများကြီး ရှိနေသေးတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များ (၈,၀၀၀) ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေသေးကြောင်း မိုးရာသီရောက်ရှိလာသဖြင့် မိုးကာ၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဆေးဝါးများ လိုအပ်နေကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org /archives/28772
၆။ ပြန်ပေးဆွဲခံရသည့် ပညာရေးဝန်ထမ်း ၂ ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က မြန်မာဘက် လွှဲပြောင်းပေး
ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရသည့် ပညာရေးဝန်ထမ်း ၂ ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်က တောင်ပြိုလက်ဝဲ ချစ်ကြည်ရေး တံတားမှတဆင့် ဇွန် ၂၃ ရက် ည ၁၀ နာရီခွဲလောက်က မြန်မာပြည်ကို တရားဝင်လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီး ကျီးကန်းပြင်ဌာနချုပ်မှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်က စစ်ဆေးနေတယ်လို့ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေက ပြောပါတယ်။ “သူတို့ကို မနေ့ကညမှာ ဘင်္ဂလားက တရားဝင်လွှဲပေးလာတယ်။ အခုတော့ ကျီးကန်းပြင်ဌာနချုပ်မှာ နယ်ခြားစောင့်နဲ့ စစ်တပ်က စစ်ဆေးမေးမြန်နေပါတယ်။ ဘယ် အချိန် မိဘလက်ထဲ ပြန်လွှဲမလဲ မသိရသေးပါ” လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ပညာရေးဝန်ထမ်းတဦးက ပြောပါတယ်။ ပြန်ပေးဆွဲခံ ထားရတဲ့ ဆရာနဲ့ ဆရာမတို့နှစ်ဦးကို ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဟာ ပြန်ပေးဆွဲအဖွဲ့က တောင်းခံထားတဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၄၁ သိန်းကို ဇွန် ၂၂ ရက်မှာ အားလုံးလွှဲပေးခဲ့ပြီးနောက် ဆရာနဲ့ ဆရာမနှစ်ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ တက္ကနပ်ဖ်မြို့နယ်၊ နီလာအုပ်စု၊ ခြံချောင်း (ခ) Kharang Khali (ရခိုင်) ကျေးရွာအနီးမှာ လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ RAB အဖွဲ့က စစ်ဆေးပြီးနောက် ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန် ၂၃ ရက်က ပြန်လွတ်လာတဲ့ ပညာရေးဝန်ထမ်း ၂ ဦးကို ခြံချောင်းကျေးရွာကနေ သွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ငါးခူရ ကျေးရွာသား ၂ ယောက်နဲ့ လက်ခံထားတဲ့ အိမ်ရှင်ကိုတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတုန်းလို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက်ရောက် ရခိုင်အမျိုးသားတဦးက ပြောပါတယ်။ “မနေ့က သူတို့ကိုလာခေါ်တဲ့ မြန်မာဘက်က ၂ ယောက်နဲ့ အတည်းခံတဲ့ အိမ်ရှင်ကိုတော့ မလွှတ်သေးပါဘူး။ BGB ကစစ်ဆေးနေတုန်းပါ။” သူတို့ဟာ ခြံချောင်းကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆရာတော်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အဲဒီကျေးရွာနေ ဦးကျော်ကျော်ရဲ့ နေအိမ်မှာ ခေတ္တနေထိုင်ခဲ့ကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဇွန် ၂၃ ရက် ညမှာတော့ ပညာရေးဝန်ထမ်း ၂ ယောက်ကို မောင်တောမြို့နယ်၊ တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့ရှိ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး တံတားထိပ်မှာ ကော့ဇ်ဘဇားမြို့အခြေစိုက် အမှတ် ၃၄ BGB နယ်ခြားစောင့်တပ် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ခြား စောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ လာရောက်လွှဲပြောင်းအပ်နှံခဲ့တာပါ။ http://burmese.dvb.no/archives/540148
၇။ ဘီးလင်းရှိ စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ တိုက်ခိုက်
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) သထုံခရိုင်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်အတွင်း စခန်းချတပ်စွဲထားသော လေးကေ စစ်ကောင်စီ စခန်းအား နယ်မြေခံ KNDO/KNLA နှင့် ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များက ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် သွားရောက်ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကြောင်း Black Warriors Force အဖွဲ့က ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်လာသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုအား ပြီးခဲ့သည့် ဇွန် ၂၂ ရက်၊ နံနက် ၁၁ နာရီဝန်းကျင်တွင် KNU လက်အောက်ခံ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA)၊ ကရင်အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးတပ် (KNDO) နှင့် Black Warriors Force (PDF) ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၄ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ စစ်ကောင်စီဘက်က ထိခိုက်မှုများ ရှိပြီးနောက် ပြည်သူလူထုများ နေထိုင်ရာ မင်းစောကျေးရွာအတွင်းသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ မင်းစောကျေးရွာမှ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး ၁ ဦး၏ ညာဘက်ခြေခုံ လက်နက် ကြီးကျည်စ ထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး နေအိမ် ၂ လုံးလည်း ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟိုက သတင်းထုတ် ပြန်ထားသည်။
၈။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ပွဲပြန်ဖြစ်မည်ကို ပြည်သူများ စိုးရိမ်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ ရခိုင့်တပ်တော် (အေအေ) တို့ သူ့လူကိုယ့်လူ အပြန်အလှန် ဖမ်းဆီးတာတွေနဲ့ စစ်ရေး အခြေအနေ မတည်ငြိမ်တာကြောင့် စစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကို ရခိုင်ပြည်သူတွေကြားမှာ စိုးရိမ်နေပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဇွန်လအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ အေအေအဖွဲ့တို့ အပြန်အလှန် ဖမ်းဆီးတာတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပြုလုပ်နေတာပါ။ စစ်ကောင်စီတပ်တွေက အေအေနဲ့ နီးစပ်သူတွေ၊ ရခိုင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေ လုပ်နေသလို အေအေဘက် ကလည်း ဇွန် ၂၃ ရက်က စစ်ကောင်စီဘက်က ဗိုလ်ကြီးအဆင့် အရာရှိကို စစ်တွေမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့သလို စစ်သားနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ယောက်ဝန်းကျင်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့တွေမှာ ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်တွေက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မြို့အဝင်အထွက်တွေ လမ်းတွေမှာ ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ကောင်စီရဲ့ အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတာတွေ၊ အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ပညာရေးဝန်ထမ်း တွေကို ပြန်ပေးဆွဲတာတွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ အခြေအနေဟာ ဆိုးရွားလာတယ်လို့ ရခိုင်အရပ်ဘက်အဖွဲ့ တွေကပြောပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့ ရခိုင့်တပ်တော် (အေအေ) ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အခြေအနေဆိုးတွေ မကြုံရအောင် အတိုင်းအတာတခုအထိ ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာလည်း စစ်ဘေးကနေရှောင်နေလို့မရတဲ့ အခြေ အနေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ လေ့လာသူတယောက်က သုံးသပ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း စစ်တပ် နဲ့ အေအေက သူ့လူကိုယ့်လူ အပြန်အလှန် ဖမ်းဆီးနေတာနဲ့ စစ်ရေးမတည်ငြိမ်တာတွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်သူတွေဟာ ကျီးလန့် စာစား ဖြစ်လာရတယ်လို့ ကျောက်တော်မြို့နယ်မှာ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို အကူအညီပေးနေတဲ့ တင်းမဆရာတော် ဦးဝါယမိန္ဒက မိန့်ပါတယ်။ စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးတာ၊ ရာသီဥတု ဆိုးရွားတာတွေကြောင့် ရေရှည်မှာ စစ်ဘေးရှောင်အရေ အတွက်က ပိုများလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရခိုင့်တပ်တော် အေအေက သူတို့ရဲ့ ရက္ခိတလမ်းစဉ်ကို အားစိုက်အကောင် အထည်ဖော်နေပြီး ဒီအခြေအနေအတိုင်းဆိုရင် မကြာခင်မှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲလာရလိမ့်မယ်လို့ လေ့လာသူ တွေက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/540185
၉။ လွိုင်ကော် ပြည်နယ်ရဲရုံးရှေ့ ပြည်သူတစ်ဦး သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခံရ
ယမန်နေ့ (ဇွန်လ ၂၃ ရက်) ညနေ ၇ နာရီခွဲဝန်းကျင်တွင် လွိုင်ကော်မြို့ ဒေါဥခူရပ်ကွက် ပြည်နယ် ရဲရုံး အနီးမှာ ပြည်သူတစ်ဦးကို ရဲကင်းကနေ ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပြည်သူတစ်ဦး ဘယ်ဖက်ခြေဒူးခေါင်း ကျည် ထိမှန်ပြီး ဒဏ်ရာသွား ခဲ့တယ်လို့ ရွှေလွိုင်ကော်ပရဟိတ လူမှုကူညီရေးဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ “မနေ့ညက ဖြစ်တဲ့နေရာတွေက အသွားအလာ တော်တော်လေးပါးတဲ့ နေရာတွေပေါ့။ အဲဖက်က တော်ရုံမသွားကြဘူးလေ။ အဲချိန်မှာ သူက ဖြစ်ချင်တော့ ရဲစခန်းရှေ့မှာ ကင်းတွေရှိတယ်လေ။ ဖြစ်ချင်တော့ သူကအဲမှာ နဲနဲလောက် သောက်ထားတယ်ထင်တယ်။ ဘေးကအုတ်ခုံကို ဝင်တိုက်မိတော့ အဲမှာရဲတွေက သူ့ကိုတားတော့ သူလည်း နဲနဲ နားလေးနေတယ်။ ဆိုတော့ တားတာကို မရပ်ဘူး မရပ်ဘဲ ဆက်မောင်းနေတော့ နောက်ကနေပစ်တာလို့ပဲ ကျတော်တို့က သိရတယ်ဗျ။” လို့ ရွှေလွိုင်ကော် ပရဟိတ လူမှုကူညီရေးဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
သေနတ်ကျည်ဆံ ၁၀ချက်ဝန်းကျင် ပစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပြီး ခြေတောက်ကို ကျည်တစ်တောင့် ထိမိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ လွိုင်ကော်ဆေးရုံမှာ အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု ခံယူနေတယ်လို့ သူက ဆက်ပြော ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ သူဟာ နေအိမ်ဖြစ်တဲ့ နောင်ယား (က) ရပ်ကွက်ကို ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ မှာ စစ်ကောင်စီ ဖက်က လွိုင်ကော်မြို့အတွင်း ညနေ ၈ နာရီမှ မနက် ၄ နာရီအတွင်း မာရှယ်လော ( Martial Law ) ထုတ်ထား တာဖြစ်ပြီး အမိန့်မလိုက် နာတဲ့ သူတွေကို အရေးယူတာတွေ မသိရပေမယ့် ပစ်ခတ်နေတာတော့ အမြဲတမ်းလိုလိုရှိနေတယ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦး ကပြောပါ တယ်။ မည်သည့်အချိန်က မည်သည့်ရပ်ကွက်တွေကို မာရှယ်လော ထုတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကန္တာရဝတီတိုင်း( မ် ) အနေနဲ့ အတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ ကရင်နီပြည်မှာ ဇွန်လ (၆) ရက်မှ (၁၉) ရက်အတွင်း အပြစ်မဲ့ပြည်သူ (၅) ဦး သတ် ဖြတ်ခံရပြီး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ (၁၂ ) ဦး ရှိတယ်လို့ ကရင်နီလူမှုအသင်းအဖွဲ့များကွန်ယက် ( KCSN ) က ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ မှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
၁၀။ ဟိုပုံး- ပင်လုံ လမ်းပိုင်းတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များလှုပ်ရှားမှုရှိ
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့ နှင့် ပင်လုံမြို့ကို ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမကြီး တစ်လျှောက်တွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ လှုပ်ရှားမှု ရှိနေကြောင်း သတင်းသိရသည်။ လက်ရှိတွင် အဆိုပါ လမ်းကြောင်းရှိ ပွန်ချောင်း မရောက် ခင် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSPP/SSA) တပ်ဖွဲ့မှ နေရာယူပြီး ၊ ထိုအနီးဝန်းကျင်တွင် ပအိုဝ်း ပြည်သူ့စစ် (PNO) နှင့် သျှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) တို့ သွားလာလှုပ် ရှားနေကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ “PNO/PNA ရဲ့ စစ်ဆေးရေးဂိတ်ရှိတဲ့ နေရာဟောင်းနဲ့ နီးတယ်၊ အခုအဲ့အနားမှာ SSPP/SSA တပ်ဖွဲ့က တပ်စွဲ သွား လာလှုပ်ရှားနေတယ်၊ သူတို့နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ ဟိုဘက်ရွာမှာကျတော့ PNO/PNA နဲ့ RCSS/SSA တို့ကရှိနေတယ်” ဟု အသက် ၃၀ ဝန်းကျင် ကျောက်တန်း ဒေသခံ အမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောသည်။ အဆိုပါ အနီးပတ်ဝန်းကျင် သည် PNO/PNA တပ်ဖွဲ့တို့၏ စစ်ဆေးရေးဂိတ် နှင့် သွားလာလှုပ်ရှားသည့် နယ်မြေ ဟောင်းဖြစ်သည့်အပြင် SSPP/SSA တပ်ဖွဲ့တို့မှ အင်အားဖြည့်တင်းနေရာ ယူမှုရှိလာပြီးသည့်နောက် ပွန်ချောင်း၏ အနောက်ဘက်ရှိ ယွုတ်ကျေးရွာဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေရာယူထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ကျောက်တန်းအုပ်စု ဟွေးလုံရွာ၊ ဟိုဟွေးရွာတို့တွင် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည် တပ်မတော် (RCSS/ SSA) တပ်ဖွဲ့ ရှိပြီး ထိုရွာအနီးရှိ ယွုတ်ရွာတို့တွင် PNO/PNA တပ်ဖွဲ့များက နေရာယူထားကြောင်း ဒေသခံများ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ “တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့နေရာယူထားတာ အရမ်းကို နီးပါတယ်၊ လမ်းလျှောက်ရင်တောင် နှစ်နာရီကျော်လောက်ပဲ ကြာမယ့်နေရာတွေပေါ့၊ အခုမှာ ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ ဆိုတော့လည်း ကျနော်တို့ က စိုးရိမ်ရတယ်၊ ကြောက်ရတယ်ပေါ့” ဟု အထက်ပါ အမျိုးသားက ဆက်လက်ပြောဆိုထားသည်။ “တိုက်ပွဲဖြစ်တာမကောင်း ဘူးလေ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ များလာတဲ့အခါတော့ ထိတွေ့မှုမဖြစ်အောင် ကြည့်ထိန်းတယ်၊ အခုထိလည်း နယ်မြေ အတွင်းမှာက အေးဆေးပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် သျှမ်းတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့က ဒီနယ်မြေ ဒီဒေသအတွင်းမှာ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုရှိမယ်၊ အင်အား ဘယ်လောက်ဝင်လာတယ်ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ မသိရဘူး” ဟု ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်ပျံ က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/28781
၁၁။ စိုက်ပျိုးရေးမလုပ်နိုင်တဲ့ ဖရူဆိုမြို့နယ် ဘက်က စစ်ရှောင်တွေ ရေရှည် စားနပ်ရိက္ခာ အတွက် စိုးရိမ်
ကရင်နီပြည် ဖရူဆိုမြို့နယ် အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာ စစ်ရှောင်နေတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ စိုက်ပျိုးရာသီမှာ ပြန်လည် မစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့အတွက် ရေရှည်စားနပ်ရိက္ခာအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေရပါတယ်။ စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ မြေနေရာတွေဟာ စစ်ကောင်စီ အခြေစိုက်တပ်တွေနဲ့ နီးကပ်နေတာတွေ၊ စစ်ရှောင်တဲ့ နေရာအနီးတဝိုက်မှာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ဖို့ နေရာမရှိတာတွေ ကြောင့် စိုက်ပျိုးခွင့်မရကြဘူးလို့ စစ်ရှောင် တစ်ဦးကပြောပါတယ်။ “ တောင်ယာ ပြန်လုပ်ခွင့်တော့ အဲ့ဒါက ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ကိုယ့်လုံခြုံရေးနဲ့ ကိုယ်သွားလာနေရတယ်။ လုပ်ခွင့်တော့ ၃ ပုံမှာ ၁ပုံလောက်ပဲ လုပ်နိုင်တော့တယ်။ ကျမတို့ရွာဆိုရင် တပ်နဲ့နီး တယ်လေ။ ၄၂၈ နဲ့ ၅၃၁ ။ ဟိုဖက်ခြမ်း ဒီဖက်ခြမ်း တောင်ပဲ ခြားနေတော့ မြေကွက်တွေ ခြံကွက်တွေ တော်တော်များများက မလုံခြုံတဲ့ နေရာဖြစ်နေတော့ လုံးလုံး ခြံမလုပ်နိုင်တဲ့ မိသားစုတွေရှိတယ်။ နည်းနည်းပါးပါး မြေပဲ လား။ စပါး အမျိုးလား။ အဲ့လောက်ပဲ ပြန်လုပ်နိုင်တယ်။ တော်တော်များများက အဲ့လိုပဲ။ဥပမာ ခါတိုင်းနှစ်ဆို ပြောင်းကောက်တို့ ၊ ပြောင်းဖူးတို့၊ မြေပဲ ဆို ပိုလျှံတဲ့ဟာ ရောင်းဖို့အတွက် လုပ်နိုင်ပေမယ့် ဒီနှစ်တော့ သုံးပုံမှာ တစ်ပုံပဲ လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့။ “ လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဖရူဆိုမြို့နယ် အနောက်ဘက်ခြမ်းဟာဆိုရင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပြီး လမ်းခရီးမှာလည်း စစ်ကောင်စီတပ် တွေရှိ နေတာကြောင့် အလှူရှင်တွေလာရောက်ဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်။ စစ်ရှောင်တွေကို လာရောက်ထောက်ပံ့တဲ့ အလှူရှင် တွေက နည်းပါးတဲ့အတွက် တစ်လကို လူတစ်ဦးအတွက် ဆန်သုံးပြည်သာရရှိကြပါတယ်။ ဆန်သုံးပြည်ဟာ ကလေးငယ်နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်သာ တစ်လစာ ဖူလုံပြီး သာမာန်လူတစ်ယောက်အတွက် မလုံလောက်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ “ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ကျနော်တို့ သိုလှောင်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ ငွေကြေးပမာဏနဲ့ ကျနော်တို့ ဝယ်နိုင်တဲ့ အတိုင်း အတာက တစ်လ၊ နှစ်လပဲ ဒီထက်ပို မရှိနိုင်ဘူး။ အခုကျနော်တို့ ဆီမှာ အရန် စားနပ်ရိက္ခာ ဘယ်လောက် သိုလှောင်နိုင်လဲဆိုရင် ကျနော်တို့ရဲ့ မှတ်တမ်းအရ အခြား အစုအဖွဲ့ မှတ်တမ်းအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် တစ်လစာပဲရှိတယ်။ တစ်လစာ တစ်လစာပဲ ရှိတယ်။ “ လို့ ဦးဗညားက ပြောပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်အများစုဟာ တောတောင်ထဲ စစ်ရှောင်ရပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ နေရပ် ပြန်နိုင်တဲ့လူဦးရေ နည်းပါးနေပါတယ်။ စစ်ကောင်စီက ဆန်ကို သယ်ယူဖို့ ကန့်သတ်ထားတာတွေရှိတဲ့အတွက် အလှူရှင်တွေ ကနေ စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေ ဆီကို ရိက္ခာတွေပို့ဆောင်ပေးဖို့ အတွက်လည်း အခက်ခဲရှိနေပါတယ်။
၁၂။ သီပေါမြို့နယ် နားမွန်းကျေးရွာနေ သျှမ်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ် နားမွန်းကျေးရွာနေ သျှမ်းအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးသည် တလနီးပါး အဆက် အသွယ်မရ ပျောက်ဆုံးနေသည့်အတွက် မိဘများက စိတ်ပူနေကြောင်း သတင်းသိရသည်။ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ ကတည်းက နေအိမ်မှ ထွက်သွားပြီး ယနေ့အထိ အဆက်အသွယ်မရ ပျောက်ဆုံးနေသည့် သီပေါမြို့ နားမွန်းကျေးရွာမှ အသက် ၁၉ နှစ် အရွယ် နန်းအောင်ခမ်းသည် ရောက်ရာအရပ်မှ ပြန်လာရန် မိဘများက တောင်းဆိုထားသည်။ “အိမ်ကနေသူငယ်ချင်းနဲ့ မြို့ထဲ သွားလည်မယ်လို့ ပြောပြီးထွက်သွားတာပါ၊ အဲ့နေ့ ဇွန် ၂ ရက်နေ့ ညနေအထိ အိမ်မရောက်သေးလို့ ကျနော်ဖုန်းဆက်ကြည့် တော့ လားရှိုးရောက်နေပြီ၊ ဒီက စားသောက်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်မယ် ဆိုပြီးတော့ပဲ သိရတယ်၊ ကျန်တာကျနော်တို့ကို ဘာမှ မပြောဘူး၊ ဒီနောက်ပိုင်းလည်း ဘာအဆက်အသွယ်မှ ထပ်မရတော့ဘူး” ဟု နန်းအောင်ခမ်း၏ ဖခင်ဖြစ်သူ လုံးအောင်လှ က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ နန်းအောင်ခမ်းသည် လုံးအောင်လှ နှင့် ပါခမ်းအိမ်တို့၏ အကြီးဆုံး သမီးဖြစ်ပြီး မွေးချင်း မောင်နှမ စုစုပေါင်း ၇ ယောက်ရှိကြောင်းလည်း သတင်းသိရသည်။
လက်ရှိတွင် အဆက်အသွယ်မရပျောက်ဆုံးနေသည့်အတွက် မသမာလူတစ်စုနှင့်တွေ့ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်နေ ကြောင်းနှင့် မသင့်တော်သည့် နေရာရောက်သွားမည်ကို စိုးရိမ်နေကြကြောင်း မိဘများက ပြောဆို ထားသည်။ “မိန်းကလေး မို့ အရာရာကို စိတ်ပူရပါတယ်၊ မကောင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ အခုက အဆက်အသွယ် လည်း မရတော့ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုလိုက်ရမှန်းမသိဘူး၊ သူ့ကို အိမ်ပြန်လာစေချင်ပါတယ်” ဟု အဖေဖြစ်သူက ဆက်လက်ပြောဆိုထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့် လပိုင်းအတွင်း ကွတ်ခိုင်မြို့မှာပင် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ပြန်ပေးဆွဲသတ်ဖြတ်ခဲ့သည် ဖြစ်စဥ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသည်။ https:// burmese.shannews.org/archives/28757
၁၃။ ဘီးလင်း NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် လေးဦး ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရပြီး တစ်ဦး သေဆုံး
မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်းမြို့နယ် ပေါ်ခီးကျေးရွာအနီးမှာ ဇွန် ၂၂ ရက်က မြို့နယ် NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မျိုးမင်း အပါ အဝင် လေးဦးကို စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေက ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာမှာ တစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ ဘီးလင်းမြို့နယ် NLD ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။ “ပေါ်ခီးကျေးရွာနားမှာ သူတို့က လယ်ကတဲရွာဘက်ကို သွားတဲ့ အချိန်မှာ စစ်ကောင်စီက စစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ဆုံတော့ သူတို့က လူလေးယောက်၊ အဲဒါကို ပစ်ခတ်ပြီး ဖမ်းဆီးတဲ့ အချိန်မှာ အခုလက်ရှိ ဦးကျော်မျိုးမင်းနဲ့ နောက်နှစ်ယောက်က အဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်။ ရွာသားတစ်ယောက်ကတော့ အပစ်ခံရပြီး ဆုံးသွားတယ်“ ဘီးလင်းမြို့နယ် NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မျိုးမင်း၊ ရပ်ကျေးပါတီဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ဦးပန်းမြင့်၊ ဦးကိုကိုမောင်နဲ့ ရွာသားတစ်ဦးဟာ ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးနဲ့အတူ လယ်ကတဲကျေးရွာဘက်ကို သွားရာမှာ စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ တိုးပြီး ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရတာလို့ ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ သုံးဦးကို ဘယ်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကို မသိရသေးဘူးလို့ သူက ဆက်ပြောပါ တယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်ကောင်စီက တစ်စုံတစ်ရာထုတ်ပြန်တာ မရှိသေးပါဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်ကောင်စီ ပြောခွင့်ရသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့် အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူး။ ဘီးလင်းမြို့နယ် NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မျိုးမင်းဟာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘီးလင်းမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမှတ် (၂) ကိုယ်စားလှယ်နေရာက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရထားသူဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ အာဏာ သိမ်းစစ်ကောင်စီက ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ – ၅၀၅ (က) အပါအဝင် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ထားတာကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/nld-chair man-arrested-in-bilin-06232022054544.html
၁၄။ လားရှိုးမြို့နယ် လူငယ် ၂၀ ကျော်ဖမ်းဆီးခံရ၊ ထောက်ပို့နှင့် အလှူငွေကောက်ခံသူများ ပိုမိုခက်ခဲလာ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နယ်တွင် နှစ်ရက်အတွင်း လူငယ် အယောက် ၂၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရသည့်အပြင် PDF များအတွက် ထောက်ပို့လုပ်ငန်းနှင့် အလှူငွေကောက်ခံသူများ ပိုမိုခက်ခဲလာကြောင်း သတင်းသိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ နှင့် ၂၀ ရက်တွင် စစ်ကောင်စီမှ လားရှိုးမြို့ပေါ်နေ အမျိုးသား ၂၀ ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး၊ ထိုထဲတွင် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပိုစ့်တင်ပေးသည့် လူငယ် တစ်ဦးလည်း ပါဝင်ကြောင်း လားရှိုးမြို့ခံတစ်ဦး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ “ဖုန်းပါမိထားတဲ့လူငယ်တွေကို ဖုန်းထဲစစ်ကြည့်ပြီး NUG တို့ PDF တို့အတွက် အလှူငွေတွေကောက်ခံတာ တော် လှန်ရေးနဲ့ ပက်သက်တာတွေ့ရင် စစ်ကြောရေးကို ပို့တယ်၊ တချို့လူငယ်တွေကျတော့ ပိုက်ဆံနဲ့ညှိပြီး ပြန်လွှတ်ပေးတာ ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းမြို့ခံ ကဆိုသည်။ ထို့အပြင် စစ်ကောင်စီတို့သည် ၎င်းတို့ ဝင်ဖမ်းသည့် နေအိမ်မှ လူငယ်ဖမ်းဆီးခံရကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်မှု များ ရှိပါက ဆိုးကျိုးဆက်ရှိလာသည့် ပြောဆိုခြိမ်းခြောက်မှုများလည်း ရှိကြောင်းသိရသည်။
လက်ရှိဖမ်းဆီးခံထားရသည့် လူငယ်များ၏ဖုန်းများမှတစ်ဆင့် တခြားလူငယ်များနှင့်အချိတ်အဆက်တို့ကို စစ်ကောင်စီ တို့မှ သိရှိသည့်အတွက် တော်လှန်ရေးအတွက် ထောက်ပို့နှင့် အလှူငွေကောက်ခံပေးနေသူများလည်း လှုပ်ရှားရခက်ခဲသွား ကြောင်း ထောက်ပို့လူငယ်တစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ “ပထမဆုံးအခက်အခဲက အလှူခံရခက်ခဲလာတယ်၊ တော်လှန်ရေးအတွက် အလှူခံပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ မိသားစု တွေကိုလည်း ငဲ့နေကြရတယ်၊ သူတို့ထိခိုက်မှာတွေ နေအိမ်ကို ချိတ်ပိတ်တာတွေကိုလည်း ရှောင်ရတယ်၊ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး လုပ်စားတဲ့သူလည်းရှိလာတော့ အလှူထည့်တဲ့သူတွေနည်း လာတယ်လေ” ဟု အထက်ပါ ထောက်ပို့က ပြောသည်။ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီတို့သည် ၎င်းတို့ကို တော်လှန်တိုက်ခိုက် နေသည့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ များကို နှိမ်နင်းနိုင်ခြင်းသော်လည်း မြို့ပေါ်လှုပ်ရှားသည့် ထောက်ပို့များနှင့် အလှူငွေကောက်ခံ ကူညီနေသူများကို ဒလန်သတင်းပေးမှုများဖြင့် ဖမ်းဆီးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းသိရသည်။ https://bur mese.shannews.org/archives/28743
၁၅။ တနိုင်းတွင် ချောင်းရေကြီးမှုကြောင့် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် ၃ခုတွင် ရေဝင်ရောက်မှု ကြုံတွေ့နေရ
ကချင်ပြည်နယ် တနိုင်းမြို့တွင် ၃ ရက်ခန့်အကြာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ချောင်းရေမြင့်တက်လာပြီး ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အတွင်း ရေကြီးရေလျှံဖြစ်ကာ လူနေအိမ်များအတွင်းသို့ ရေဝင်ရောက်မှုများကြုံတွေ့နေရ ကြောင်း ဒေသခံများထံမှသိရသည်။ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့မှစပြီး အဆက်မပြတ် မိုးရွာသွန်းနေသဖြင့် တနိုင်းချောင်းနှင့် တပီချောင်း ၂ ခု သည် ရေကြီးရေလျှံဖြစ်ကာ မြို့ပေါ်ရှိသော ပုံခုံးနှင့် ဆမ့်ဆရပ်ကွက်တို့တွင် ရေဝင်ရောက်လာသောကြောင့် အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျော်ခန့်က ရေဘေးဒဏ်ကို ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု တနိုင်ဒေသခံ အမျိုးသားတစ်ဦးက KNG သတင်းဌာနကို ပြောဆိုထား သည်။ “အခုရေဝင်နေတဲ့ နေရာက ၃နေရာလောက်ရှိပြီ။ အိမ်ခေါင်မိုးတွေအထိတော့မရောက်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် တဝက် လောက်တော့ကြီးနေပြီ။ ရေဝင်ရောက်တဲ့ရပ်ကွက်က ပြည်သူတွေက နီးစပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ဆိုင်ကယ်၊ ကား ပစ္စည်းတွေ ရွှေ့ပြောင်းထားကြတယ်။ ရေကတက်နေတုန်းဘဲ။ ဒီထက်ကြီးလာရင် ပြည်သူအများအတွက် အစားအသောက်တွေလိုအပ် လာမယ်လို့ ထင်တယ်”ဟုပြောဆိုပြောဆိုသည်။
တနိုင်းဒေသတွင် လက်ရှိအချိန်အထိ မိုးရွာသွန်းနေသည့်အတွက် ချောင်းရေမြင့်တက်မှုများရှိနေပြီး ရေဝင်ရောက်မှုရှိ နေသော ရပ်ကွက်ဒေသခံပြည်သူများသည်လည်း လက်ရှိအခြေအနေထက် ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေကြောင်း သိရသည်။ ယမန်နှစ်တွင် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အတွင်းအထိ ရေဝင်ရောက်မှုမရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် မိုးများသည့်အတွက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အထိ ရေဝင်ရောက်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဒေသခံများပြောဆိုချက်မှ သိရသည်။ https://burmese.kachi nnews.com/2022/06/24/jun24-yl1/
၁၆။ ပိတ်ထားသည့် ဖယ်ခုံမြို့နှင့် ဆက်သည့် လမ်းတချို့ပြန်ဖွင့် စစ်ကောင်စီ မှ စစ်ဆေးမှုတင်းကြပ်နေ
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံမြို့နှင့် ထိစပ်နေသည့် လမ်းကြောင်းတချို့ကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က ယခင်ပိတ်ထားရာမှ လက်ရှိတွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သော်လည်း စစ်ဆေးမှုတင်းကြပ် နေကြောင်း သတင်းသိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၁၈ရက်မှ စတင် ပိတ်ထားသည့် ပင်လောင်း – တောင်ကြီး – ကျောက်တလုံး – ဆိုက်ခေါက် နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်တို့ ဆက်သွယ်ထားသည့် မှော်ဘီတံတားဂိတ်ကို စစ်ကောင်စီတို့ ယခုရက်ပိုင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် လိုက်ကြောင်း သတင်းသိရသည်။ “မှော်ဘီလမ်းကြောင်း ကိုလည်း သူတို့ပြန်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ၊ စစ်ဆေးမှုကတော့ ရှိနေတုန်းပါ၊ အစောင့်စစ်သား နဲ့ PNO စစ်သားတွေကလည်း စောင့်နေတုန်းပေါ့၊ ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့အခါလည်းရှိတယ်” ဟုဒေသခံအမျိုးသမီး တစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။
ယခင်က အဆိုပါလမ်းကြောင်းကို ဖယ်ခုံမြို့နယ်နှင့် ညောင်ရွှေနယ်စပ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဥ်တွင် ဒေသအတွင်းရှိ ဒေသခံ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ဆေးဝါးအကူအညီနှင့် တခြားထောက်ပံ့ကူညီမှုများ မရရန် ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။ လက်ရှိတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သားများ နှင့် PNO စစ်သားများပူးပေါင်းကာ အဆိုပါလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် လုံခြုံရေး ကင်းပုန်း ကင်းတဲချထားခြင်းများ ပြုလုပ်နေ လျက်ရှိပြီး လမ်းသွားလမ်းလာ ခရီးသွား ပြည်သူများကို ငွေကြေးကောက်ခံမှုများ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်းသိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/28761
၁၇။ ဆိပ်မူအထက်တန်းကျောင်းဝင်းတွင် မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၊ ထိခိုက်ပျက်စီမှုရှိ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူကျေးရွာတွင်ရှိသော ဆိပ်မူအထက်တန်းကျောင်းဝင်းအတွင်း ယနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီဝန်းကျင်တွင် မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှသိရသည်။ ဆိပ်မူကျေးရွာ(ယခင်အခေါ်အဝေါ် ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာ) အထက်တန်းကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ အမည်မသိအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လက်ချက်ကြောင့် မိုင်းတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဆိပ်မူကျေးရွာနေ အမျိုးသားတစ်ဦးက KNG သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။ “ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် သွားတာက ဒီနေ့ ၁၂ နာရီ ဆယ်မိနစ်လောက်ကဖြစ်သွားတာ ဟုတ်တယ်။ စာသင်ကျောင်းဝန်းထဲကစာကြည့်တိုက် ရှိတယ်။ အဲ့ဒီစာကြည့်တိုက်နောက်ကြောမှာကွဲသွားတာ။ ထောင်ထားပြီး ခွဲခံရတယ်လို့ သိရတယ်။ ကျောင်းထဲဆိုတော့ ထိအောင်မလုပ် ချင်လို့ ထိအောင်လုပ်ချင်ရင်တော့ထိမှာပဲ”ဟုပြောဆိုသည်။
ယင်းမိုင်းကွဲမှုကြောင့် ထိုကျောင်းတွင် ကျောင်းတက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား/သူများ ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့သော်လည်း စာကြည့်တိုက်ဆောင် တံခါး၊ ပြတင်းပေါက် မှန်များထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကြောင်းသိရပြီး ပေါက်ကွဲမှုကို မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ဆောင်သွားကို မသိရသေးကြောင်း ဒေသခံများပြောဆိုချက်မှသိရသည်။ အဆိုပါ ဆိပ်မူအထက်တန်းကျောင်းသည် လတ်တလော စစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကျောင်းတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပြီး တစ်ထောင်နီးပါး တက်ရောက်နေ ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2022/06/24/jun24-az2/
၁၈။ ရေဖြူတွင် မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သည့်နေရာအား မြို့နယ်ပကဖနှင့် ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဆီး
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ရေဖြူမြို့နယ်၊ ပုဂေါဇွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်းဒပ်ရွာအနီး မူးယစ်ဆေး ရောင်းဝယ် ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ နေရာကို ရေဖြူမြို့နယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (ပကဖ) နဲ့ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ ဇင်ယော်တပ်စုတို့က ဇွန် ၂၃ ရက် ညနေ ၃ နာရီလောက်မှာ သွားရောက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ သွားရောက်ရှင်းလင်းရာမှာ WY စိတ်ကြွ ရူးသွပ်ဆေး ၁,၂၀၀ ပြား၊ အိုက်စ် ၁၆ တောင့် အထုပ် ၃ ထုပ်၊ ဟန်းဖုန်း ၇ လုံး၊ ပုဆိန် ၂ လက်နဲ့ ငွေသား ၉ သိန်းကျော်ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး မူးယစ်ဆေး ရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးနေသူတွေကို ဖမ်းဆီးရမိမှု ရှိမရှိကိုတော့ မဖော်ပြထား ပါဘူး။ သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ငွေသားတွေကိုတော့ သူတို့အဖွဲ့တွေရဲ့ လက်နက်ဝယ်ယူရေးမှာ အသုံးချသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရေဖြူမြို့နယ်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် လောင်းကစားဝိုင်းနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ သိသိသာသာ များပြားလာကြောင်း ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန် ၉ ရက်ကလည်း လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ မောင်းမကန် ရွာမှာ မူးယစ်ဆေး ရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ လင်မယား ၂ ယောက်ကို လောင်းလုံးမြို့နယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ ထားဝယ် ပြောက်ကျားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့က ပူးပေါင်းရှင်းလင်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives /540139
၁၉။ PDF ဖမ်းသွားသည့် ရှမ်းနီလူငယ်ခေါင်းဆောင် ပြန်လွတ်လာ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF က ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန် ၁၉ ရက်က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်က ရှမ်းနီလူငယ်ကွန်ရက် ဒုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ် ရှမ်းနီစာပေ ဗန်းမောက်တောင်ပိုင်း တာဝန်ခံလည်းဖြစ်သူ စိုင်းကျန်အောင် (ခ) စိုင်းဆေလိုင်းဟာ ဇွန် ၂၃ ရက် ညနေပိုင်းက ပြန်လွတ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ PDF အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ စိုင်းဆေလိုင်း ကို ဖမ်းခေါ်သွားခဲ့တဲ့ ဗန်းမောက်မြို့နယ် မံကပ်ကျေးရွာကိုပဲ ဇွန် ၂၃ ရက် ညနေ ၃ နာရီခွဲလောက်မှာ ပြန်လာပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ သွားကြိုလာခဲ့တဲ့ ဗန်းမောက်မြို့နယ် ရှမ်းနီစာပေယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး စိုင်းထွန်းမြင့် က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ “သူတို့ချိန်းထားတာက နေ့လယ် ၁၂ နာရီဆိုတော့ ကျနော်တို့လည်း ၁၂ နာရီကတည်းက သွားစောင့် နေတာပေါ့၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လာပို့ပေးဖို့ပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ဖုန်းလိုင်းတွေလည်း မကောင်းဘူး၊ ဆက်သွယ်ရ အဆင်မပြေဘူး။ တကယ်ရောက်လာတာ ညနေ ၃ နာရီခွဲမှ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းမရောက်ခင် လမ်းမှာပဲ ကျနော်တို့ ကြိုလာခဲ့ တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဖမ်းသွားသလဲဆိုတာကို သိပ်မေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က လက်နက်တွေနဲ့၊ ကျနော်တို့က ဘာမှမှမရှိဘဲ၊ ပြန်လွှတ်ပေး တာပဲ တော်လှပြီဆိုပြီး မမေးလိုက်ပါဘူး။ သူ့ကိုခေါ်သွားတုန်းက မျက်နှာကို အဝတ်နဲ့အုပ်ပြီး ခေါ်သွားလို့ ဘယ်နေရာမှန်း မသိဘူးတဲ့။ ဟိုမှာ ခြေထောက်နဲ့ အကန်ခံရတယ်၊ ကျောကိုလည်းရိုက်တယ်၊ ကြိုးတုတ်ခံရတယ်၊ ပြင်ပဒဏ်ရာ ကြီးကြီးမားမား မရှိပေမဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲတယ်၊ အတွင်းကြေလို့ ယူဆပါတယ်။ သူ့ကို ဆေးခန်းပို့ပြီး ဓာတ်မှန်လည်း ရိုက် ထားပါတယ်။” အဓိကမေးမြန်းခံရတာကတော့ ရှမ်းနီတပ်မတော် SNA နဲ့ ပတ်သက်မှုရှိမရှိ ဆိုတာဖြစ်ကြောင်း၊ စိုင်းဆေလိုင်း ကလည်း သူဟာ စာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေသာ လုပ်လို့ မသိကြောင်းပဲ ဖြေကြားလို့ ရိုက်နှက်ခံရတာလို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တော့ သူ့ကို SNA နဲ့ မပတ်သက်ဖို့၊ ဘက်လိုက်မှုမရှိဖို့ ပြောပြီး ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
ဖမ်းခေါ်သွားတဲ့အဖွဲ့မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း PDF နဲ့ ဒေသခံ PDF တွေဖြစ်ကြောင်း၊ စိုင်းဆေလိုင်းဟာ စာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေသာ လုပ်ဆောင်ပြီး စစ်သုံ့ပန်းလည်း မဟုတ်ပါဘဲနဲ့ ခုလို ရိုက်နှက်ကန်ကျောက်ခံရတဲ့အပေါ် ရှမ်းနီ စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အနေနဲ့ လွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း၊ နေရထိုင်ရတာလည်း လုံခြုံမှုမရှိသလို ဖြစ်ရတယ်လို့ဗ န်းမောက် ရှမ်းနီစာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ပြောသွားပါတယ်။ အခုလို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးချင်း အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးရိုက်နှက် တာဟာ NUG အစိုးရရဲ့ မူဘောင်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု၊ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဖြစ်လို့ NUG အနေနဲ့ မိမိအောက်ခြေ အဖွဲ့ဝင်တွေပေါ် အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်း လမ်းညွှန်ပေးစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/540187
၂၀။ မြောက်ဦးမြို့နယ်မှ အသက်မပြည့်သေးသည့် မွတ်ဆလင်လူငယ်နှစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံထားရ
မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ပေါင်းတုတ်ကျေးရွာမှ အသက်မပြည့်သေးသည့် မွတ်ဆလင်လူငယ်နှစ်ဦးအား မြန်မာစစ်တပ်က ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြီး ယနေ့အချိန်အထိ ပြန်မလွတ်သေးကြောင်းသိရသည်။ မြောက်ဦးမြို့ ခမရ(၅၄၀)တပ်ရင်းမှ မြန်မာစစ်သားများသည် စစ်ကား ၂ စီးအပြည့်ဖြင့် ပေါင်းတုတ်ကျေးရွာအတွင်းသို့ ညဉ့် အချိန်ဝင်ရောက်လာကာ ပေါင်းတုတ်ရွာကြီးမှ ရာအိမ်မှူးနှင့် ရွာ(သစ်)မှ ရာအိမ်မှူးတို့ကို လာရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ ယင်းနောက် ရာအိမ်မှူးနှစ်ဦးအားရှာမတွေ့သဖြင့် ပေါင်းတုတ်ရွာကြီးရှိ ရာအိမ်မှူးအိမ်မှ အလုပ်သမားနှစ်ဦးနှင့် ပေါင်းတုတ်ရွာ(သစ်)ရှိ ရာအိမ်မှူး၏သားဖြစ်သူတို့ကို ဖမ်းခေါ်သွားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပေါင်းတုတ်ရွာ(သစ်)မှ ရာအိမ်မှူး ၏ သားကို အာမခံဖြင့် ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသည့်ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
“အဲဒီရာအိမ်မှူးနှစ်ဦးကို အေအေနဲ့ဆက်စပ်တယ်ဆိုပြီး လာဖမ်းတာ။ ဒါပေမဲ့ ရာအိမ်မှူးတွေက ရှောင်တိမ်းနေကြ တော့ အိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားနှစ်ယောက်နဲ့ သူတို့ရဲ့သားကို ကားပေါ်ဖမ်းတင်သွားတာ။ ရာအိမ်မှူးသားတစ်ယောက်ကတော့ အဖမ်းခံရတဲ့နေ့ကတည်းက မိသားစုတွေ အာမခံနဲ့သွားထုတ်လို့ ညဉ့် ၁ နာရီလောက်မှာ ပြန်လွတ်လာတယ်။ အလုပ်သမား နှစ်ယောက် ကတော့ အခုထိပြန်မလွတ်သေးပါဘူး”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ကလေးငယ် နှစ်ဦးမှာ အသက် ၁၃ နှစ်သာရှိသေးပြီး တစ်ဦး၏အမည်မှာ မာစီးရီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်တစ်ဦးမှာ ယခင်ကျေးရွာလူကြီးဟောင်း၏ သားဖြစ် ကြောင်းလည်း ဒေသခံများကပြောသည်။ လက်ရှိတွင် ပေါင်းတုတ်ကျေးရွာမှဒေသခံများမှာ မြန်မာစစ်တပ်မှ ထပ်မံလာရောက် ကာ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ကျေးရွာမှ တချို့လူငယ်ပိုင်းများမှာ ရှောင်တိမ်းနေကြောင်းလည်း သိရ သည်။ “ကျနော်အပါအဝင် ရွာသူ၊ရွာသားတွေအကုန်လုံးကတော့ စိုးရိမ်စိတ် ဝင်နေကြတာပေါ့။ သူတို့တွေထပ်ရောက်လာပြီး စစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်မှာကိုကြောက်လို့ ညဆိုရင် ကောင်းကောင်းတောင်အိပ်မပျော်ဘူး’’ဟု ရွာခံတစ်ဦးကပြောသည်။
၂၁။ စစ်ကောင်စီရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒေသခံတဦး ဒဏ်ရာရရှိ
ယမန်နေ့ (ဇွန် ၂၃ ရက်) ည ၇:၃၀ ခန့်က ကရင်နီပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့နယ် ဒေါဥခူရပ်ကွက် ပြည်နယ်ရဲရုံးအနီး ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်လာတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ကို စစ်ကောင်စီတပ်က ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် ယာဉ်မောင်းဒေသခံအမျိုးသား တဦး ဒူးဆစ်အနီးမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပစ်ခတ်ခံရသူ မောင်းနှင်လာတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ဟာ စစ်ကောင်စီရဲ့ ဂိတ်ကို ဖြတ်သန်းစဉ်မှာ စစ်ကောင်စီက တားဆီးတာကို မရပ်ပေးဘဲ ဂိတ်က အတားအဆီးများကို တိုက်ဖြတ်မောင်းနှင်စဥ် စစ်ကောင်စီ က ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ ပစ်ခတ်ခံရသူကို ဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ရွှေလွိုင်ကော်ပရဟိတအသင်းရဲ့ တာဝန်ရှိသူက ပြောပြပါတယ်။
“သတိပေးတဲ့သဘောနဲ့ သေနတ်ထောင်ဖောက်သေးတယ်။ သူက မရပ်ပေးဘူး။ သူက နည်းနည်းလည်း မူးနေတယ် လေ။ ပစ်တာတော့ အချက်ပေါင်းမနည်းဘူး။ ကားတစီးလုံးလည်း ကျည်ပေါက်တွေချည်းပဲ။ သူ့ကို ဆေးရုံတော့ ပို့ထားပြီ။ ဒဏ်ရာက ကြီးပေမဲ့ ဖြတ်ရတောက်ရတာတော့ မဖြစ်လောက်ဘူးထင်တယ်။ အတိအကျတော့ မသိသေးဘူးခင်ဗျ” လို့ Karenni’s Voice ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ပစ်ခတ်ခံရသူ ဦးပေါလူငါးရယ်ဟာ လွိုင်ကော်မြို့နယ် နောင်ယားရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သူအပါအဝင် ယခုဇွန်လအတွင်း စစ်ကောင်စီကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ ထားတဲ့ အရပ်သားပြည်သူ ၁၄ ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း ၁၄ ဦးအနက် အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးငယ် ၄ ဦး ပါဝင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ခွန်းမားရ်ကိုဘန် (ဥက္ကဌဟောင်း၊ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရေးဆွဲရေးနှင့် ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ (FCDCC)
Thawng Tha Lian S (Deputy Executive Director, Center for Development and Ethnic Studies-CDES)
Moderator- Benjamin (Basic Concept of Federalism trainer)
Live FaceBook Pages
– Federal Journal
– Kachin News Group
– Network Media Group
– Progressive Karenni People Force – PKPF
– Karenni voice
– The Chinland Post
– Than Lwin Times
– Than lwin Khet News